San Htun's Diary: September 2014
ဘဝခရီးသည် - ၃
ဗူးသီး စားမစားတော့ မသိဘူး ဝေ့တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဘူးသီးညီနောင် ခုနစ်ဖော် ကာတွန်းကားတော့ ခေတ်စားတယ်။ ညီအစ်ကို ခုနစ်ယောက်က တယောက်တမျိုးစီ အစွမ်းရှိကြတယ်။ တစ်ယောက်ကလေ၊ တစ်ယောက်ကမီး၊ တစ်ယောက်ကရေ။ အငယ်ဆုံးလေးကို မြွေမကြီးက မွေးစားပြီး ညီအစ်ကိုတွေကို ပြန်တိုက်ခိုင်းတယ်။ အငယ်ဆုံးလေးက ညီအစ်ကိုမှန်း မသိတော့ ချကြတာပေါ့။ ညီအစ်ကိုတွေဆုံမှ မြွေမကြီးကို နိုင်မှာမို့ညီအစ်ကိုတွေ မဆုံအောင် မြွေမကြီးက လုပ်တာ။ အဲဒီကာတွန်းကား ဘယ်လောက်ခေတ်စားလဲဆိုရင် ဟိုးတလောတုန်းက ဘွဲ့ နှင်းသဘင်ပွဲမှာ ကောင်လေးခုနစ်ယောက် ဘူးသီးညီနောင် ခုနစ်ဖော်ဝတ်စုံဝတ်တဲ့အကြောင်း သတင်းထဲ ပါလိုက်သေးတယ်။ ဗီယက်နမ်မှာလည်း အနောက်ဖက်သို့ခရီးထွက်ခြင်း (Journey to the West) ပြပြီဆိုလို့ ကတော့ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက် ရောက်ပြီလို့ သာ မှတ်လိုက်တော့။
ဝါရှင်တန်ဒီစီရုံးမှာ နေ့ လည်ထမင်းစားချိန်ဆိုရင် ဗီယက်နမ်လေး ငုယင်က အနောက်ဖက်သို့ ခရီးသွားခြင်းရုပ်ရှင် ကြည့်လေ့ရှိတယ်။ ဗီယက်နမ်မှာ ငုယင်ဆိုတဲ့နာမည်က ယောက်ျား၊ မိန်းမ မရွေးဘူးပေါ့နော် ဝိုင်း ( ဝိုင်း နာမည်မှာ ငုယင် ပါတယ်) ဟုတ်တယ်။ ကိုယ်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက အဲဒီရုပ်ရှင် သိပ်ခေတ်စားတာ မျောက်မင်း စွန်းဝူခုံးကို သိပ်ကြိုက်တယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို ပါကျဲဝက်လို ငှဲ..ငှဲ..ငှဲ ဆိုပြီး လုပ်ရယ်တာ သိပ်ရယ်ရတာပဲ။ အဲဒီတုန်းက ကိုရီးယားကား ခေတ်မစားသေးဘူး။ သိုင်းကားတွေ ခေတ်စားတယ် ပိုးမင်းသားရဲ့သိုင်းဝိညာဉ်၊ နဂါးနိုင်ဓား။ တရုတ်သိုင်းကားတွေ ကြည့်တယ်၊ သိုင်းစာအုပ် ဖတ်တယ်။ ကြာလာတော့လည်း ဝှီ..ဝှီ..ဝှီ..ဝှစ်..ဝှစ်..ဝှစ်..ဟူး...ဟူး...ဟူး တွေ များလို့အဓိပ္ဗာယ်မရှိဘူးဆိုပြီး မဖတ်တော့ဘူး။ ဝိုင်းက သိုင်းဝထ္ထုတစ်ပုဒ်ကို ခုလေးတင် ရထားပေါ်မှာ ဖတ်လာတာ ဘာစာအုပ်လဲ။
ကောင်းတဲ့ဂိုဏ်းနဲ့မကောင်းတဲ့ဂိုဏ်း အဖြူရောင်ဂိုဏ်းသားတွေက ပုလွေမှုတ်ကြတယ် တရုတ်သိုင်းဝထ္ထုနာမည်ကြီးဆရာနာမည်ကို ဗီယက်နမ်လေသံနဲ့ရွတ်ပြတော့ တရုတ်က နားမလည်။ နာမည်ကြီးတရုတ် သိုင်းဝထ္ထုရေးဆရာနာမည်တွေကို ဝေ့က ရွတ်ပြတယ်။ နောက်တော့ ဘယ်သူဆိုတာ သူတို့ နှစ်ယောက် သိသွားကြတယ်။ ကို်ယ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက တရုတ်ကား မေမေကြီး၊ မေမေလေး၊ ပိုင်ဟွေ့ ၊ ဟုန်မေဟွမ်တို့ခေတ်စားတယ်။ နောက်တော့ ဂျပန်ကား အိုးရှင်းရုပ်ရှင်ဆို ကိုယ်တို့ တွေ သိပ်ကြိုက်ကြတာ။ ခုတော့လား ကိုးရီးယားမှ ကိုးရီးယား။ ဂျက်ကီချမ်းရုပ်ရှင်တွေကို ကြိုက်တယ် ရယ်ရလို့ ။ The Myth ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်တေးကို ကြိုက်တယ်။ ဝေ့သူငယ်ချင်းတွေ ကာရာအိုကေဆိုင်သွားရင် အဲဒီသီချင်း ဆိုကြတယ် လာ...လာ...လာ...နာ...နာ...နာ..။ ဟာ.. သီချင်းလည်း မရဘဲနဲ့လာ..လာ..လာ...နာ..နာ..နာ ဆိုပြီး ရောမချစမ်းနဲ့ ။ ဟား..ဟား..ဟား..အင်း... အနုပညာဆိုတာ လူမျိုး၊ဘာသာ၊ နိုင်ငံ မခြားတော့ပါလား။
ဝေ့ မင်းသူငယ်ချင်းတွေ လမ်းလျှောက်တာ ဝါသနာ မပါဘူးလား။ သူတို့ လား ဘီယာဆိုင်ဆိုရင်တော့ လိုက်မယ်တဲ့ ပြတိုက်၊ ပန်းခြံ၊ တောင်တက်မယ် ဆိုရင်တော့ ဝေါင်ဝေါင်ရှေးတဲ့။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေလည်း တောင်တက်ဖို့ ၊ ပြတိုက်သွားဖို့ ဆို နိုးပဲ။ လမ်းလည်းမလျှောက်နိုင်ဘူး၊ တနေကုန် အိန္ဒိယရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်တာ မညောင်းဘူးလား မသိဘူး။ ဟ...သူတို့ ကလည်း အိမ်မှာ အေးအေးဆေးဆေး နှပ်မနေဘဲ ဘယ့်နှယ့် ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာ တောင်သွားတက်၊ ပြတိုက်သွားပါလိမ့်လို့တွေးမှာပေါ့။ ဝေ့ရေ မင်း ကျောင်းပြီးရင် အစိုးရအလုပ် လုပ်မှာလား၊ အပြင်ဝန်ထမ်းလုပ်မှာလား။ မင်းတို့ တရုတ်ပြည်တော့ မသိဘူး ကိုယ်တို့ တိုင်းပြည်မှာတော့ ဗိုလ်မူး အဲ ဗိုလ်မှုးအဆင့်လောက်နဲ့ ကို အတော်ဟုတ်နေပြီ။ ခု တရုတ်သမ္မတသစ်က လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကင်းရှင်းရေး လုပ်နေတော့ အရင်လို စားဖို့မချောင်တော့ဘူး။ ဒါဆို ဝေ့ ဘေဂျင်းမြို့ တော် တက်မှာလား။ ဘေဂျင်းက လူရှုပ်တယ် လေထုညစ်ညမ်းတယ် ဝေ့ဇာတိနားက မြို့ ကြီးလောက်ပဲ တက်ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ ဝေ့တော့ တရုတ်ပြည်ရောက်ရင် ဖေ့ဘွတ်လည်း သုံးလည်းမရ၊ ဂျီမေးလ်လည်း သုံးလို့ မရတော့ ကိုယ်တို့ တွေ အဆက်အသွယ် ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဟုတ်တယ် ဝိုင်းသူငယ်ချင်းတွေ တရုတ်ပြည် ပြန်သွားရင် အဆက်အသွယ်ကို မရှိတော့တာ။
ဝိုင်းတို့ ဗီယက်နမ်မှာလည်း တခုခုဆို အစိုးရက ဘမ်းတယ်။ ဒီတော့ ပရောက်စီတွေနဲ့ကျော်ခွကြပြီး ဂျီမေးလ်၊ ဖေ့ဘွတ် ပြန်သုံးကြတာပဲ။ ဟေ...ကိုယ်တို့ တိုင်းပြည်မှာလည်း ဘာထူးလဲ အတူတူပဲ တခုခုဆို အစိုးရက အင်တာနက်ကို နှေးပစ်လိုက်တာ။ သတင်းဆိုဒ်တွေကို ဖွင့်လိုမရအောင် ဘမ်းပစ်ရင် ပရောက်စီတွေနဲ့ကျော်ခွရတယ်။ မင်းတို့ ဒီမိုကရေစီမိခင် အမေစုသတင်းက ဗီယက်နမ်တီဗွီမှာ အမြဲပါတယ်။ ဝိုင်းတို့ ဗီယက်နမ်တွေ အမေစုကို လေးစားတယ်ကွ။ တရုတ်လေး ဝေ့ဆီကတော့ အမေစုကို သိတယ်ဆိုတဲ့စကား ထွက်မလာဘူး။ နီပေါ၊ အိန္ဒိယ၊ မလေးရှား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အမေရိကန်တွေက အမေစုကို သိကြပေမဲ့ တရုတ်တွေ မသိကြတာ အံ့သြစရာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမေစု သမ္မတဖြစ်ရင် တရုတ်လက်အောက်ခံအစိုးရ လုပ်မှာမဟုတ်တာ သေချာလွန်းတော့ တရုတ်အစိုးရက အမေစုသတင်း ဘယ်လွှင့်ပါ့မလဲ။ တလောတုန်းက အမေစုအကြောင်း တရုတ်တီဗွီသတင်းမှာ လွှင့်တဲ့အကြောင်း ဖေ့ဘွတ်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး၊ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ဘွဲ့ ရထားပေမဲ့ ဝေ့နဲ့ ဝိုင်း နိုင်ငံရေး စိတ်မဝင်စားကြဘူး။
ဘုရားပုထိုးတွေရှိတဲ့ပုဂံကို သွားလည်ချင်တယ်။ ကိုယ်လည်း ဗီယက်နမ်က ဟောင်လန်ဘေကို သွားလည်ချင်တယ်။ ဗီယက်နမ်ရိုးရာဝတ်စုံလေးက လှတယ်နော် ဝိုင်း ကျက်သရေလည်း ရှိတယ်။ အယ်မလေး အမြင်သာလှတာ မလွတ်လပ်ဘူး။ အမ်...ဂါဝန်အရှည်ကြီးအောက်မှာ ဘောင်းဘီပွပွ ဝတ်တာလေ လွတ်လပ်တယ်လုို့ထင်နေတာ။ အောက်ကသာ လွတ်လပ်သာအေ့ အပေါ်က ကျပ်ထုတ်နေအောင် ဝတ်မှလှတာ။ အထက်တန်းကျောင်းအထိ ရိုးရာဝတ်စုံ ဝတ်ရပေမဲ့ ပွပွချောင်ချောင်လေး။ ပွဲတွေဆိုရင် လက်မောင်းအတိ ၊ ရင်အတိ ကျပ်ထုပ်နေအောင် ဝတ်ရတာ အသက်ရှူကျပ်တယ်။ ဗီယက်နမ်မှာ တောင်၊ မြောက်၊ အလယ် လေသံကွဲတယ်။ ဝိုင်းဆို စကားပြောလိုက်တာနဲ့ မြောက်ဗီယက်နမ်က လာမှန်းသိတယ်။ အလယ်ပိုင်းလေသံကတော့ အတော်ဆိုးတယ် ဗီယက်နမ်အချင်းချင်းတောင် နားမလည်ဘူး။ ဗီယက်နမ်စကား သင်ချင်ရင် မြောက်ပိုင်းမှာ လာသင်ကြတယ် လေယူလေသိမ်း နားထောင်ကောင်းလို့ ။
တရုတ်မှာတော့ ဘေဂျင်းဟွာ့လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ဘေဂျင်းလေသံက standard ပဲ။ ဒါပေမဲ့ တရွှီရွှီတွေ များတယ်။ အင်း ကိုယ်တို့ တိုင်းပြည်မှာတော့ အလယ်ပိုင်းဒေသ မန္တလေးကို ညွှန်းကြမယ်ထင်တယ်။ မန်းသားတွေ စကားပြောကြတာ ယဉ်ကျေးလို့ တဲ့။ ဝေ့က ပြင်သစ်စကားပြော ကနေဒီးယန်းဆီက ပြင်သစ်စာ သင်နေတာဆိုတော့ သူ သိသလောက် ဝိုင်းနဲ့ပြင်သစ်လို မှုတ်ကြတယ်။ ဝေ့ကို ပြင်သစ်စကားပြော သင်ပေးတဲ့ကျောင်းသားက ကနေဒါနိုင်ငံ ကေ့ဘတ်ပြည်နယ်က။ ဝိုင်းက ကေ့ဘတ်ခွာ ကေ့ဘတ် Quebec ဒေသ ပြင်သစ်စကားပြောက အင်မတန် အသံထွက်ဆိုးတာ ပြင်သစ်အချင်းချင်တောင် နားမလည်ဘူး။ ဝိုင်း အီတလီမှာ နေတုန်းက အိမ်ရှင်က ကနေဒါနိုင်ငံ ကေ့ဘတ် Quebec ပြည်နယ်မှာနေတဲ့ သူ့ တူမ အလည်လာမှာမို့ သူ မရှိတဲ့အချိန် ကြည့်ရှုပေးပါလို့ မှာထားတယ်။ သူ့ တူမက ဝိုင်းကို လာမေးတာ ပြင်သစ်စကားဆိုပေမဲ့ ဗီယက်နမ်မှာ တက္ကသိုလ်တက်တုန်းက ပြင်သစ်စာသင်၊ ပြင်သစ်ပြည်မှာလည်း ကျောင်းတက်ဖူးတဲ့ ဝိုင်း တယောက် အတော့်ကို နားမလည်နိုင်တာတဲ့။ ကိုယ်ကတော့ ပြင်သစ်စကားဆို ရှု...ရှု...ရှု လို့ သာ ကြားနေတော့တာပဲ။ ကိုယ်တို့ သုံးယောက် ဘာသာစကားတွေ စိတ်ဝင်စားတာလည်း တူတယ်။
ဝေ့က ပြတိုက်တွေ သွားရတာ ကြိုက်တယ်။ နယူးယောက်မှာ ဝေ့ မသွားဖူးတဲ့ ပြတိုက် မရှိသလောက်ဘဲ။ ကို်ယ်တို့ ကတော့ အုပ်စုနဲ့ မှ၊ ဈေးမကြီးမှ ပြတိုက်ထက် ပန်းခြံတွေ၊ တောင်တွေကို ပိုသဘောကျတယ်။ တောင်တက်ပြီးလို့နားကြရင် ဝိုင်းနဲ့ ကိုယ်က ပန်းသီးအမြဲစားတယ်။ ဝေ့က မင်းတို့ပန်းသီး အတော်ကြိုက်တယ်ထင်တယ်နော်လို့ပြောရင် ဝိုင်းနဲ့ ကိုယ် တယောက်ကိုတယောက် ကြည့်ရင်း ပြုံးကြတယ်။ ပန်းသီးကြိုက်တာထက် ပန်းသီးက ဈေးပေါလို့ ၊ တာရှည်အထားခံလို့ ။ ဝေ့ မင်းရော အမြဲတမ်း ခေါက်မုန့်ယူလာတယ် ခေါက်မုန့်ကြိုက်လို့ လား ။ သူလည်း so..so..so... ကိုယ်တို့ လို ချက်ပြုတ်ဖို့ ပျင်းတဲ့ ငပျင်းလေး။ ကိုယ်လား မီးဖိုချောင်ကို သူတို့ နဲ့လားလားမှ မဆိုင်လို့ တွေးတဲ့ ကောင်တွေကို တစက်မှ ကြည့်မရဘူး။ ကိုယ်တို့ အဖေ၊ အမေ ခေတ်တုန်းကတော့ အဖေတယောက်ရှာတာ တအိမ်လုံးထိုင်စား အမေက အိမ်ထောင်ရှင်မ။ ခုခေတ်ကျတော့ နှစ်ယောက်လုံး အလုပ်ထွက်လုပ်တာတောင် မလောက်ငှချင်။
ဘဝခရီးသည် - ၂
အက်ကေးဒီယားခရီး သွားပြီးတော့ ဝိုင်းနဲ့ပိုခင်လာတယ်။ ငါးမျှားတဲ့ အကြောင်းပြောကြတော့ ဝိုင်းအဖေက သူတို့ အိမ်နားက ရေကန်ထဲ ငါးသားပေါက်လေးတွေထည့် အစားကျွှေး။ ငါးတွေကြီးလာတော့မှ ငါးမျှားတံနဲ့အခန့် သား ငါးထိုင်မျှားတာတဲ့။ အင်း... ငါး မမိမှာတော့ ပူစရာမလိုဘူး။ အာတီဖစ်ရှယ်ငါးစာကြောင့် လက်သီးဆုပ်လောက်တောင်မရှိတဲ့ လီလီပေါ့ ငါးလေးတွေ မိလို့ကန်ထဲပြန်လွှတ်ရတဲ့ အမ်းထရူး၊ စကားများလွန်းလို့ငါးတွေ နားညည်းပြီး လစ်ပြေးကြတာ သူ ငါးမျှားရင် တကောင်မှ မမိတဲ့ မလေးရှားတရုတ်မလေး ထိန်ထိန်တို့ အကြောင်း ပြောရင်း ရယ်မောရသေးတယ်။ ဝိုင်းအဖေ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းလို့ပိုက်ထည့်ရတာ ဒေါ်လာတစ်ထောင်လောက်ပဲ ကုန်တယ်။ ဒါတောင် သူတို့ အစိုးရက တော်တော်များများ အကုန်ခံတာ။ ကိုယ့်အဖေလည်း နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းလို့ဘန်ကောက်မှာ ခွဲစိတ်တာ ပိုက်ဆံဆိုတာ ကုန်လိုက်တာ။ သေချာတာကတော့ ဗီယက်နမ်ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်စနစ်က မြန်မာပြည်ထက် အများကြီးသာတယ်။
ဟနွိုင်းမြို့ ရဲ့အိမ်ငှားခက မန်ဟက်တန် နီးပါးလောက် မြှင့်တယ်။ ကုန်ဈေးနူန်းလည်း ကြီးတော့ ဗီယက်နမ်တွေဟာ ကောင်းကောင်းစား၊ ခရီးသွားဖို့ ထက် ထမင်းနပ်မှန်ဖို့အလုပ်အသေ လုပ်ရပါသတဲ့။ ဒီမိုကရေစီ တောင်ဗီယက်နမ်နဲ့ကွန်မြူနစ် မြောက်ဗီယက်နမ်တို့စစ်ဖြစ်ကြတော့ ရုရှတွေနဲ့ ပေါင်းတဲ့ မြောက်ဗီယက်နမ်က နိုင်တယ်။ စစ်ရှုံးတဲ့တောင်ဗီယက်နမ်တွေ မဟာမိတ်ယူအက်စ်ဆီကို လှေတွေနဲ့သက်လုပြေးရတယ်။ အဲဒီစစ်ပြေးတွေရဲ့မျိုးဆက်တွေက ယူအက်စ်မှာ ကြီးပြင်းလာပြီး တော့ မြောက်ဗီယက်နမ်လေသံကြားရင် ဒင်းတို့ ကြောင့် သူတို့ တိုင်းပြည်ကို စွန့် ခွာခဲ့ရတာဆိုပြီး အခဲမကြေကြဘူးတဲ့။ ဗီယက်နမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ တောင်ရယ်မြောက်ရယ်လို့ မတွေးတော့ဘူး ဗီယက်နမ်တနိုင်ငံတည်းလို့တွေးတယ်။ အဲ... ဗီယက်နမ်တွေ တရုတ်ကိုတော့ မုန်းကြတယ်။
အခုဆို တရုတ်ဆန့် ကျင်ရေး စိတ်တွေ ပိုပြင်းထန်လာတယ်။ ဗီယက်နမ်ပိုင်ကျွှန်းကို တရုတ်က သူတို့ ပိုင်ဆိုပြီး အငြင်းပွားနေလို့ တဲ့။ တလောကတောင် ဗီယက်နမ်မှာ တရုတ်ဆန့် ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊ တရုတ်ပိုင်စက်ရုံတွေကို လူတွေဝိုင်းပြီး ဖျက်ဆီးကြတာ သတင်းမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဗီယက်နမ်တင် တရုတ်မုန်းတာ မဟုတ်ဘူး ဖိလစ်ပိုင်တွေလည်း မုန်းတယ်တဲ့။ အီတလီမှာရှိတဲ့ တရုတ်သံရုံးကို ချီတက်ဆန္ဒပြတော့ ဗီယက်နမ်တွေအပြင် ဖိလစ်ပိုင်တွေလည်း ပါတယ်တဲ့။ တန်ဇနီးယားက ဆာဖာရီက နာမည်ကြီးတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတွေက ဆင်းရဲလွန်းလို့စားစရာမရှိ သောက်စရာမရှိ။ ပညာရေးရောဟင် စားစရာတောင် မရှိတဲ့ဟာ ဘယ်လိုလုပ် စာသင်နိုင်မှာလဲ။ သူတို့ ကို ကြည့်ပြီးတော့ ဝိုင်းက သူ့ ဘဝက သူတို့ ထက် အများကြီးသာတယ်လို့ကျေနပ်ရောင့်ရဲသွားတယ်။ အလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားရတာမို့အဲဒီနိုင်ငံတွေများ အလည်အပတ် သွားလည်ချင်သလားမေးတော့ ဟင့်အင်းတဲ့။
ဝိုင်း သွားတုန်းက လေယာဉ်တစီးလုံး တရုတ်ကျပန်း အလုပ်သမားတွေချည်းပဲတဲ့။ ဝိုင်းကို တရုတ်ထင်ပြီး တရုတ်စကားတွေ လာပြောနေတာ ဝိုင်းက သူ တရုတ်မဟုတ်ဘူး တရုတ်စကားမပြောတတ်ဘူး ဗီယက်နမ်ဆိုတော့မှ တတ်သမျှ မှတ်သမျှ အင်္ဂလိပ်စကားကို ညှစ်ထုတ်ပြီး ဘိုလိုမှုတ်သတဲ့။ သူတို့ တွေက အာဖရိကမှာရှိတဲ့ တရုတ်ပိုင်စက်ရုံတွေဆီမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့လာကြတာ။ ဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်၊ ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ရမယ်မှန်းလည်း မသိဘူးတဲ့။ ရာသီဥတုက ဆိုးရွားလွန်း၊ ဘာသာစကားက တလုံးမှ မတတ်၊ အစားအသောက် လုံးဝမတူတဲ့ဒေသမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ လာတာတဲ့ ဘုရားရေ ။ အာဖရိကမှာလည်း တရုတ်တွေ ကြီးစိုးနေပါသတဲ့။ ကိုယ်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်း မေခနဲ့ မလိခ မြစ်ဆုံပြီး ဧရာဝတီမြစ်အဖြစ် စတင်စီးဆင်းတဲ့နေရာမှာ ရေကာတာဆောက်၊ သံလွင်မြစ်မှာ ရေကာတာဆောက်၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း၊ ကျောက်မီးသွေးတူး အားလုံး တရုတ်လက်ချည်းပဲ။ အခု မြန်မာတွေလည်း တရုတ် မုန်းလာတယ်။
ယိုးဒယားတွေ ဗမာကို မုန်းတယ် ဟင်..ဟုတ်လား ဘာ့ကြောင့်လဲ။ ဗမာဘုရင်တွေ တန်ခိုးထွားရင် ပါဝါပြချင်တဲ့ အနေနဲ့ ယိုးဒယားပြည်ကို သွား... သွားသိမ်းတယ်လေ။ အယုဒ္ဓယမှာ အပျက်အစီးတွေကို ခုထိမပြင်ဘဲ အဲဒါ ဖမာ့တွေ လုပ်ခဲ့တာဆိုပြီး ဗမာတွေကို မုန်းတယ်။ အဟဲ...ကမ္ဘောဒီးယားတွေလည်း ဗီယက်နမ်ကို မုန်းတယ် ဟင်...ဟုတ်လား ဗီယက်နမ်တွေ ခမာတွေကို ဘာလုပ်ခဲ့ပါလိမ့်။ ဟိုအရင်တုန်းက ဗီယက်နမ်တွေ ခမာတွေကို ငြင်းဆဲခဲ့တယ် ထင်တယ်။ ခြင်္သေ့ကျွှန်းမှာ ကျောင်းတက်တုန်းက ကိုယ်တို့ အဖွဲ့ က တရုတ်လေးဆို ဂျပန်တွေကို အသေမုန်းတယ်။ သူ့ ပြည်နယ်က ကိုရီးယားနယ်စပ်နားမှာ။ ကြည့်ရတာ သူ့ အဘိုး၊ အဘွားတွေကို ဂျပန်က ညှည်းဆဲခဲ့ပုံပေါ်တယ်။
အဖေအများစုက သားသမီးတွေနဲ့သိပ်မရောပေမဲ့ ကိုယ့်အဖေကတော့ သားသမီးတွေနဲ့ဘောလုံးပွဲကြည့်၊ ညစာ အတူစားဖို့ စောင့်၊ ငယ်ငယ်က အကြောင်းတွေကို ပြောပြနဲ့ကိုယ်တို့ နဲ့ရင်းနှီးတယ်။ ဝေ့အဖေကတော့ ပြောင်းပြန် စကားလည်းမပြော ဖာသိဖာသာနေတယ်။ ဂျပန်ဆန့် ကျင်ရေး တီဗွီချန်နယ်တွေကို ကြည့်ဖို့ တော့ ဝေ့ကို လာခေါ်တယ်တဲ့။ ဂျပန်ဆန့် ကျင်ရေး တီဗွီချယ်နယ်တွေမှ လေးငါးခုတောင် ရှိတယ်။ ဝေ့ မင်းရော ဂျပန် မုန်းသလား။ ဝိုင်းက ကိုယ့်လက်ကို လာတွန်းတယ် မမေးနဲ့ ဆိုတဲ့ သဘော။ မုန်းပါဘူး ခုက ၂၁ ရာစုလေ အတိတ်ကို အတိတ်မှာ ချန်သင့်တယ်။ တရုတ်မှာ ကလေးတစ်ယောက်တည်း မွေးခွင့်ရှိတာ မဟုတ်ဘူးလား ဝေ့မှာ ဘာဖြစ်လို့အစ်မ ရှိနေတာလဲ။ ဝေ့အဖေက ယောက်ျားလေး လိုချင်လို့ တဲ့။ ဝေ့အဖေက ဝေ့အတွက် အစိုးရကို ပိုက်ဆံအများကြီး ဆောင်လိုက်ရမယ် ထင်တယ်။ ကိုယ် မသိဘူးကွ မင်းတို့ တိုင်ပြည်မှာရော သားယောက်ျားလေး ပိုမလိုချင်ဘူးလား ဟင့်အင်း။
ကိုယ်တို့မြန်မာတွေမှာ မိသားစုနာမည် မရှိဘူး ဒီတော့ မိသားစုနာမည် ဆက်ခံဖို့ယောက်ျားလေး မလိုဘူး။ ကိုယ်တို့ မိသားစုမှာ သားယောကျာ်းလေး တစ်ယောက်ရှိတာ အငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်တော့ ဘာမှ အားမကိုးရဘူး။ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်က ပိုထက်တယ်။ သမီးနှစ်ယောက်အတွက် နှစ်တိုင်း အဖေ၊ အမေ ဆုတက်ယူရပေမဲ့ သားအတွက် တခါမှဆုမယူဘူးတဲ့အပြင် စာမေးပွဲကျလို့အတန်းပိုင်ဆရာမက ခေါ်တွေ့ တယ်။ သမီးမိန်းကလေးက အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လို့အိမ်ထောင်ပြုရင် ယောက္ခမအိမ်ကို ထည့်ပေးလိုက်ရတာက တရုတ်အယူအဆကွ။ ကိုယ့်တို့ မိသားစုကတော့ သမီးမိန်းကလေး အိမ်ထောင်ပြုရင် သားသမက်တယောက် ရတယ်။ သားအိမ်ထောင်ပြုရင် သားတစ်ယောက် ပေးလိုက်ရတာလို့တွေးတယ်။ သားတွေ အိမ်ထောင်ကျသွားရင် မိဘကို ထောက်ပံ့ဖို့ဆိုတာ သူ့ မိန်းမပေါ်မှာ မူတည်နေတယ် အင်မတန် စိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့ မိန်းမမှ ကြည်ဖြူတာ။ သမီးတွေ အိမ်ထောင်ကျသွားရင် မထောက်ပံ့နိုင်ဦးတော့ မိဘအိမ် ဟင်းတခွက်တော့ ပြန်လာတယ်။
ကိုယ့်အမေဆို ကိုယ့်မောင်လေး ကဲလွန်းလို့ကလေးတွေကို စိတ်ကုန်သွားတာ သူ့ တူ၊ တူမတွေကို ရော့အင့် ကျွှေးသင့်တာကျွှေး ပေးသင့်တာပေးပြီး လုံးဝအနားကပ်မခံဘူး။ ကိုယ့်မိဘတွေက ပညာတတ် မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သားသမီးကို ပညာတတ်ဖြစ်ရမယ်၊ ပညာအမွေပေးမယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တို့ ပညာရေးကို အရမ်းအားပေးတာ။ ကိုယ့်မိဘတွေကြောင့်သာ မဟုတ်ရင် ကိုယ်တော့ ဒီအခြေအနေထိ ရောက်လာမယ် မထင်ဘူး။ ကိုယ့်မိဘတွေကတော့ မိဘကံမကောင်းဘူး။ စာသင်ချင်ပေမဲ့ သင်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူး။ ကိုယ်ကတော့ ဒီလိုမိဘ၊ မောင်နှမတွေရတာ သိပ်ကံကောင်းတာပဲ။ ဝိုင်းအဘိုးက အတော်ထက်တာ ပြင်သစ်လို ကျွှမ်းကျွှမ်းကျင်ကျင် ပြောတတ်တယ်။ သူ့ မြေးတွေကို အင်္ဂလိပ်စာသင်ဖို့သူကိုယ်တိုင် အင်္ဂလိပ်စာ သင်တယ်။ ဝိုင်း အင်္ဂလိပ်စာကောင်းအောင် သူပဲ လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာ။ ဒါကြောင့် ဝိုင်း ဗီယက်နမ်တနိုင်ငံလုံးစစ် အင်္ဂလိပ်စာ စာမေးပွဲမှာ ဒုတိယ ရတာ။ ဝိုင်းတက်မဲ့ဘာသာ၊ ကျောင်းတွေကို ဝိုင်းအဘိုးက အကုန်ရွေးပေးတာကွ။ ဟား...မင်းအဘိုးက တကယ်တော်တာပဲ။
တချို့ ကျတော့လည်း မိဘက ထောက်ပံနိုင် သားသမီးက မထက်မြက်။ သားသမီးက ထက်မြက်ပေမဲ့ မိဘက မတတ်နိုင်။ မိဘကလည်း ထောက်ပံ့နိုင် သားသမီးကလည်း တော်မှ အောင်မြင်တာ။ ဟုတ်တယ်နော် ကိုယ်တို့ တွေ တကယ်ကံကောင်းတယ် ဒီလိုမိဘ၊ မိသားစုမျိုးရလို့ ။ ကိုယ်ကတော့ အရှေ့ တိုင်းက သားသမီးပြုစုပျိုးထောင်တာကို မကြိုက်ဘူး။ ကလေးတွေကို ဘာမှမလုပ်ခိုင်းတော့ အသက်ကဖြင့် ၇၊ ၈ နှစ် ရှိနေပြီ ကုိုယ့်ဘာသာ မစားတတ်သေးဘူး၊ ခွံ့ ကျွှေးရတာနဲ့ ။ အနောက်တို်င်းက မိဘတွေက ငယ်ငယ်ကတည်း ကလေးလုပ်နိုင်တာလေးတွေ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ခိုင်းတော့ ကလေးတွေက တာဝန်သိတယ်။ အခု မစားရင် အငတ်ထားမယ်ဆို တကယ်အငတ်ထားတာ၊ ကလေးကြောင့် ကြမ်းပြင်ပေသွားရင် ကလေးကို သုတ်နည်းပြပြီး ပြန်သုတ်ခိုင်းတယ်။ ည ၈ နာရီခွဲ ကလေးတွေအိပ်ချိန်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့အိပ်ရတယ်။ ရှောပင်းမောလ်မှာ စာအုပ်ဝယ်ဖို့ လာတာ စက်ဘီးတောင်းရင် ခုလာတာ စက်ဘီးဝယ်ဖို့ လာတာ မဟုတ်ဘူး၊ စာအုပ်ဝယ်ဖို့ လာတာလို့ကလေး နားလည်သဘောပေါက် လက်ခံလာအောင် အသေအချာ ဆုံးမတယ်။
အာခေါင်ခြစ်ငိုရင်လည်း စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ရှင်းပြတယ်။ ကိုယ့်အမေဆို ဘယ်စိတ်ရှည်ပါ့မလဲ ပြောမရဘူးလား ကဲဟယ်ဆိုပြီး ကျောပြင်ကို ဗြောတင်ပစ်လိုက်မှာ။ ကျူရှင်ဆရာမ လာတာကို ကလေးက တံခါးဖွင့်မပေးလို့ကျူရှင်ဆရာမက နာရီဝက်လောက် တံခါးဝမှာ စောင့်နေရတာ တွေ့ ဖူးတယ်။ ကိုယ်ဆို နားရွက်ဆွဲပြီး ခေါင်းကိုခေါက်ထည့်ချင်တာ လက်ကို ယားနေတာပဲ။ အနောက်တိုင်းသားတွေ ကလေးကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိအောင်၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်အောင် သင်ပေးတာ သဘောကျတယ်။ ဘူးပင်အောက်မှာ ထိုင်ကြတော့ ကိုယ်တို့ တိုင်းပြည်မှာဆို ဗူးသီးကို ကြော်စားတယ်၊ ချက်စားတယ် မင်းတို့ တိုင်းပြည်မှာရော။ တရုတ်ပြည်မှာတော့ ချက်စားတယ်လို့မကြားဘူးပေါင်။ ချက်စားရင် ချက်စားမှာပေါ့ ကွေ ဝေ့က မီးဖိုချောင်မှ မဝင်တာ၊ စားဖူးတာကို သတိမထားမိတာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ့။ အင်း.. ဗီယက်နမ်မှာ ဘူးသီးကို ဘယ်လိုစားကြပါလိမ့်...ဗီယက်နမ်တွေ ဗူးသီးမစားကြဘူး ထင်တယ်။ ဖုန်းဆက်ရင် ကိုယ့်အစ်မတွေကို မေးဖို့မှတ်ထားရဦးမယ်။ ဟမ်မလေး... တရုတ်နဲ့ဗီယက်နမ် ဗူးသီး စားသလား မစားဘူးလားဆိုတာ တရုတ်နဲ့ဗီယက်နမ်ကိုယ်တိုင် မသိဘူးဆိုတော့..။
ဘဝခရီးသည် - ၁
ဘဝရထားစီးသွားတုန်း ခရီးစဉ်အစကနေ အဆုံးအထိ တခရီးတည်း သွားတဲ့သူဆိုတာ အရှားသား။ တက်လာတဲ့သူ၊ ဆင်းလာတဲ့သူတွေကြားမှာ အသိမိတ်ဆွေ ဖြစ်တဲ့သူ ရှိသလို ရထားအတူတူ စီးခဲ့မှန်းတောင် မသိလုိုက်သူတွေလည်း ရှိရဲ့ ။ ဆောင့်ကြွားကြွားနဲ့ကြည့်ရတာ အချိုးမပြေဘူးလို့မြင်ကတည်းက အမြင်ကပ်နေတာမျိုးလည်း ရှိသေးတယ်။ တချို့ ကြတာ့ သီချင်းအကျယ်ကြီးဖွင့်နားထောင်၊ နှစ်ယောက်စာနေရာယူ၊ မက်တပ်ရပ်စီးတဲ့သူကို ကိုယ်ချင်းမစာ ခြေထောက်ဆန့် ထားတဲ့သူ၊ တက်နင်းမိ၊ ထိခိုက်မိလို့ဆောရီးပြောပေမဲ့ မကျေမနပ်ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေ အမျိုးမျိုးပါပဲ။ ဝါသနာတူ၊ စရိုက်တူလို့ခဏတာလေး ခင်မင်လိုက်ရပေမဲ့ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်လို ခင်မင်သွားတဲ့သူ နှစ်ယောက်ရှိတယ်။
နေခြည်နွေးနွေး ဖြာဆင်းမနေဘဲ တိမ်အုံ့ တဲ့ သြဂုတ်လရဲ့တခုသော စနေနေ့ မှာ အင်ဝုဒ်ပန်းခြံဆီကို ခြေဆန့် ကြတဲ့ လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ မှာ သူတို့ နှစ်ယောက်နဲ့စတင်သိကျွှမ်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ ဆိုတာက ဝေ့နဲ့ဝိုင်း။ ဒီအဖွဲ့ ကို ပထမဆုံးအကြိမ် လာမှန်းသိလောက်အောင် ကြောင်စီစီလေး ဖြစ်နေတဲ့ ဝေ့ကို အဖွဲ့ ဝင်ဖြစ်တာ သုံးလလောက် ကြာပြီမို့စီနီယာဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်ကပဲ စတင်မိတ်ဖွဲ့ ခဲ့တယ်။ ဝေ့က ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှာ လာတက်နေတဲ့ တရုတ်ကျောင်းသား။ ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်က ဟားဗတ်၊ အမ်အိုင်တီ၊ ပရင့်စတန်၊ ယေးလ်တို့ လို နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်ပါ။ ကျောင်းပြီးလို့ဋ္ဌာနေမပြန်ခင် နယူးယောက်တခွင် လိမ့်နေတဲ့သူပေါ့။ အမေရိကန်ပြည်ပေါက် ဘင်္ဂလားမလေး ဖာရီယာနဲ့အဖွဲ့ ကျတဲ့ ဗီယက်နမ်မလေး ဝိုင်းကို East Village လမ်းလျှောက်တုန်းက မြင်ဖူးတယ်ဆိုတော့ ဟုတ်တယ်တဲ့။ လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ ထဲမှာ အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဝေ့၊ ဝိုင်း၊ ဖာရီယာနဲ့ကိုယ်တို့တွဲဖြစ်တယ်။ ဖာရီယာနဲ့ကိုယ်က လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ နဲ့ အပတ်တိုင်းနီးပါး လမ်းလျှောက်တော့ သိနှင့်နေတယ်။
ကိုယ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက အသည်းစွဲ အနောက်ဖက်သို့ ခရီးထွက်ခြင်း (စွန်းဝူခုန်း၊ ပါကျဲ) ၊ ကျန်ကျောင်း ရုပ်ရှင်တွေ၊ သွားခဲ့ဖူးတဲ့ခရီးတွေ၊ ကျောင်းမှာ ဗရုတ်ကျတဲ့ အကြောင်းတွေ၊ အမေရိကန်မှာ ကြုံတွေ့ ရတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ ဝေ့နဲ့ ကိုယ်က အဖွဲ့ ကျတယ်။ ဖာရီယာ၊ ဝိုင်း၊ ကိုယ် အပြန်ရထားပေါ်မှာ စကားပြောကြရင်း ဝိုင်းက လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလကမှ အီတလီကနေ ပြောင်းလာတာတဲ့။ နောင်တပတ် ဟောင်ကောင်နဂါးလှေပြိုင်ပွဲ ဖလပ်ရှင်းမြက်ခင်းပြင် လမ်းလျှောက်ပွဲမှာ ဖာရီယာ၊ ဝိုင်းနဲ့ကိုယ်တို့ပြန်ဆုံကြတယ်။ ဝိုင်းမိတ်ဆွေကြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တောင်တက်သမား၊ စီပီအေ ဒေးဗစ်နဲ့သိကျွှမ်းရတယ်။ အက်ကေးဒီယားအမျိုးသားဥယျာဉ်ရှိတဲ့ မိန်းပြည်နယ်အကြောင်း ပြောပြတော့ ဝိုင်းက စိတ်ဝင်စားတယ်တဲ့။ အီတလီမှာ နေခဲ့တဲ့ ခုနစ်နှစ်အတွင်း ဥရောပတခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် လည်ခဲ့သူမို့ယူအက်စ်တခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် လည်ချင်ပါသတဲ့။
ဝိုင်းနဲ့အီးမေးလ်တွေပို့ ။ အပတ်စဉ် ကိုယ်တို့ ပါဝင်တဲ့ လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ က အဲဒီအပတ် လမ်းလျှောက်တာ စိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းဘူး။ တခြား meetup အဖွဲ့ က Cold Springs ကို သွားကြတာတွေ့ တော့ ဝိုင်းက သွားကြရအောင်တဲ့။ ပရောက်ဖက်ရှင်နယ် တောင်တက်သမားကြီ ဒေးဗစ်က အသေအချာ လမ်းညွှန်တယ်။ နောက်တော့ Bear Mountains ၊ Staten Island ကုို သွားလည်ကြတယ်။ ဝိုင်းနဲ့ခရီးသွားရတာ အတော်အဆင်ပြေတယ်။ သူက ကိုယ့်ထက်တောင် တက်ကြွနေသေးတယ်။ ဝိုင်းနဲ့တောင်တွေသွားတက်၊ လမ်းလျှောက်ထွက်တော့မှ သူ့ အကြောင်း ပိုသိလာတယ်။ ဗီယက်နမ်မြောက်ပိုင်း ဟနွိုင်းမှာ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ဝိုင်းက အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲမှာ တနိုင်ငံလုံးအဆင့် ဒုတိယရတော့ နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တွေကို နောက်ထပ်ရေးဖြေစာမေးပွဲတွေ ဖြေစရာမလိုဘဲ တန်းဝင်တယ်။ သူ ရွေးချယ်တာ international relations မေဂျာ။ အဲဒီတက္ကသိုလ်က ဗီယက်နမ်တနိုင်ငံလုံးမှာ တခုတည်း ရှိပါသတဲ့။
ဗီယက်နမ်ကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်အားလုံးက ဗီယက်နမ်ဘာသာနဲ့ရေးထားပြီး ဆရာတွေကလည်း ဗီယက်နမ်လိုပြောပြီး သင်ကြတော့ ဗီယက်နမ်တွေ အင်္ဂလိပ်စာအသံထွက် မကောင်းကြဘူး။ ကျောင်းစတက်တုန်းက မိုင်းဖန်စကားကို ဘယ်သူမှ နားမလည်ဘူး။ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံတဲ့ ခြင်္သေ့ကျွှန်းမှာ နေဖူးတဲ့ ကိုယ်ပဲ မိုင်းဖန် ပြောတာ နားလည်တယ်။ မိုင်းဖန် အင်္ဂလိပ်လို ပြောတာကို ကိုယ်က အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ပေးရတယ်။ ဝိုင်းတို့ ကျောင်းကတော့ အင်္ဂလိပ်စာကို ဗြိတိသျှဆရာတွေက သင်သလို၊ ပြင်သစ်စာလည်း သင်ရတယ်။ ကျောင်းပြီးတော့ ယိုးဒယားနိုင်ငံ အေအိုင်တီမှာ စကော်လားရှစ်ရတယ်။ ယိုးဒယားမှာလည်း ပျော်ပါသတဲ့။ နောက် စကော်လားရှစ်ရလို့ပြင်သစ်မှာ တစ်နှစ်ကျောင်းတက်ဖူးတယ်။ ကျောင်းပြီးတော့ အီတလီက ယူအန်မှာ အလုပ်ရတယ်။ သူ့ လစာက အီတလီတွေထက် ကောင်း၊ အလုပ်စဝင်ခါစက အီတလီသားရေအိတ်ကို တစ်နှစ်လောက် ရူးလိုက်သေးတယ်။ နောက်တော့ ခရီးသွားတာကို ကြိုက်သွားလို့ဘဝကို ရိုးရိုးစင်းစင်း နေထို်င်ပြီး ရသမျှပိုက်ဆံတွေကို ခရီးသွားပါသတဲ့။ သူ့ အလုပ်ကလည်း ကမ္ဘာပတ်ရတော့ ဝိုင်း မရောက်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံဆိုတာ ခပ်ရှားရှား။
ယူအန်ကနေ လမ်းလျှောက်ရင် ၁၀ မိနစ်လောက်ပဲဝေးတဲ့ မက်ဟန်တန် တိုက်ခန်းကျဉ်းကျဉ်းရဲ့ဧည့်ခန်းကို အခန်းဖွဲ့ ထားတဲ့ သူ့ အခန်းလခက ကိုယ့်အခန်းလခထက် နှစ်ဆများတယ်။ ကိုယ့်ရုံးကတော့ ရထားစီးရင် နာရီဝက်ဆုိုပေမဲ့ လမ်းလျှောက်တာ၊ ရထားပြောင်းစီးရတာတွေနဲ့၄၅ မိနစ်၊ ၁ နာရီသာသာပဲ။ ကိုယ်က ရထား ၁ နာရီစီးပြီးလို့အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာ ဝိုင်းက Gym မှာ အားကစားသွားလုပ်၊ Zoomba ၊ SaSa ၊ ballet သွားကပြီးနေပြီ။ ဝိုင်းက တီဗွီ၊ ရုပ်ရှင်လည်း မကြည့်ဘူး။ သူ့ အချိန်တွေကို တန်ဖိုးရှိရှိ အသုံးချတယ်။ ယူအန်ဆိုတော့ စတိတ်(ပြည်နယ်)တက်စ်၊ ဖယ်ဒရယ်(အစိုးရ)တက်စ် ဆောင်စရာမလိုဘူး။ ယူအန်ဘဏ် သုံးတယ် ခရစ်ဒစ်ကဒ် မသုံးဘူး။ ရှေးရိုးသမား ဝိုင်းက ငွေသားနဲ့ ပေးတယ် အိတ်ထဲမှာ ငွေသား အမြဲဆောင်ထားတယ်။ အိတ်ထဲမှာ ငွေသားမရှိရင် နေလို့ မကောင်းဘူးတဲ့။ ကိုယ်က ခရစ်ဒစ်ကက်နဲ့ပေးလို့ မရတော့မှ ငွေသားသုံးတယ်။ ငွေသားရှိရဲ့ သားနဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်နဲ့ ငွေရှင်းတဲ့ ကိုယ့်ကို ဝိုင်းက ပြုံးကြည့်ရင် ခရစ်ဒစ်စကိုးတက်အောင် လုပ်နေတာလို့ကိုယ်က ရေရွတ်တယ်။
ဆီနီဂေါ၊ ဂါနာ၊ နိုင်ဂျီးရီးယားတို့ လို နိုင်ငံတွေကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားရလို့international health insurance ယူပြီး တလ ၅၀၀ ပေးရတယ်။ ပင်စင် ( 401k ) အတွက် စုရင်လည်း ယူအန်က နှစ်ဆစုပေးတယ်။ ခွင့်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်တို့ က တစ်နှစ်မှာ ၁၀ ရက်ရတာ ဝိုင်းက တစ်လရတယ်။ ဒီတော့ ဒီဇင်ဘာတလလုံး ခွင့်ယူပြီး ဗီယက်နမ်ကို အလည်ပြန်တယ်တဲ့။ ယူအန်က ကောင်းလိုက်တာ ကိုယ်လည်း ယူအန်မှာ အလုပ်ရချင်လိုက်တာ။ ယူအန်မှာရဖို့သိပ်ခက်တာ လုပ်သက် ၁၀ နှစ်လောက်ရှိမှ။ ဂျပန်၊ ဒိန်းမတ်တို့ လို ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေက ဘွဲ့ ရပြီးခါစ သူတို့ နိုင်ငံသားတွေကို ယူအန်မှာ အလုပ်ဆင်းခိုင်းတာ။ လစာကို သူတို့ အစိုးရက ပေးတယ်။ အလုပ်နေရာလစ်လပ်လို့လူခေါ်မယ်ဆိုရင် အပြင်လူကိုခေါ်မလား၊ ဒီမှာအခုလက်ရှိ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူကို ခေါ်မလား။ သူတို့ ကိုပဲ အလုပ်ခန့် တော့မှာပေါ့ သူတို့ က ယူအန်မှာ လုပ်နေတာကိုး။ အဲဒါကြောင့် အလုပ်ရဖို့ခက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့။ ဝိုင်းလည်း စဝင်တုန်းက ဘာအားလပ်ရက်၊ ဘာအခွင့်အရေးမှ မရဘူးတဲ့။
တနေ့ တော စင်ထရယ်ပါ့ခ်တိုးကို သွားရင်း ဝေ့နဲ့ပြန်ဆုံတယ်။ တိုးပြီးသွားပေမဲ့ ကိုယ်တို့ တွေ ရေကန်တပတ် လမ်းလျှောက်ကြတယ်။ ဝေ့က ပိတ်ရက်တွေဆို တီဗွီကြည့်တာထက် ပန်းခြံတွေ၊ ပြတိုက်တွေ သွားတာ ဝါသနာပါတယ်။ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ဘီယာဆိုင်ထိုင်ဖို့ လောက်သာ စိတ်ဝင်စားတဲ့။ ဝေ့ရဲ့ဗရုတ်သုတ်ခ သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်း၊ ဝိုင်းရဲ့နိုင်ငံတကာအတွေ့ အကြုံအကြောင်း၊ ကိုယ်သွားဖူးတဲ့ ယူအက်စ်ပြည်နယ်တွေအကြောင်းတွေ ဖလှယ်ကြတာ အတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။ ဝေ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်အကောက်အပ်တယ်။ လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ မှာ တခါတွေ့ ပြီး နောက်ဘယ်တော့မှ မတွေ့ တော့တဲ့ သူတွေအများကြီးမို့ဝေ့နဲ့ပြန်တွေ့ လိမ့်မယ်လို့ ဘယ်လိုမှ မထင်ထားတာပါ။ ကိုယ်တို့ ဝက်ဝံတောင်ကို သွားတက်မှာမို့ဝေ့ကို ဖိတ်ခေါ်တော့ တက်နက်စီပြည်နယ် ဂရိတ်စမုတ်ကီတောင်ကို သွားလည်နေမှာမို့မလိုက်တော့ဘူးတဲ့။
အက်ကေဒီးယားသွား တောလား - ၃
ညနေ ၃ နာရီခွဲ စုရပ်မှာပြန်ဆုံ လေးနာရီမှာထွက်မဲ့ အက်ကေဒီးယားနေရှားခရူ Acadia Nature Cruise စီးဖို့တက်သုတ်နှင်ကြပြန်တယ်။ မိန်းပြည်နယ်ရဲ့ရေလမ်းခရီးဥပဒေနဲ့ အညီ ဒီသဘောင်္မှာ အသက်ကယ်ဘော ဘယ်နှစ်ခု၊ ဘယ်နေရာမှာ ထားတဲ့အကြောင်း၊ ချမ်းရင် ယူခြုံဖို့စောင်ပါးလေးတွေ ထားရှိတဲ့အကြောင်း၊ ခရီးသည်တွေ ဘေးအန္တာရယ် ကင်းရှင်းဖို့ ကို အဓိကထားပြောဆိုပြီး ကပ္ဗတိန်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ ကလေးတွေကို အသက်ကယ်ဘောကွင်း ဝတ်မလားမေးတော့ ခေါင်းခါပြီး နိုးတဲ့။ ခရီးစဉ်က ၂ နာရီကြာပြီး ရင်သပ်ရူမောလှပတဲ့ မိန်းပြည်နယ်ရဲ့ကမ်းခြေအလှ၊ အက်ကေဒီယားအမျိုးသားဥယျာဉ်၊ Frenchman ပင်လယ်အော်မှာ ရှိတဲ့ ကျွှန်းလေးတွေ၊ ဘားဟာဘား ကမ်းခြေအလှကို တွေ့ မြင်ရမှာပါတဲ့။
ပင်လယ်ကမ်းခြေမို့တနေ့၂ ကြိမ် ဒီရေ အတက်အကျ ရှိပါတယ်။ ရေထရက်၊ ရေသေရက်တွေက လပြည့်၊ လကွယ်တာနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဟိုင်းကြီးကျွှန်းမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ပေခဲ့ ရေတက်၊ ရေကျချိန်၊ ရေထရက်၊ ရေသေရက်မှန်း မသိဘူးရယ်။ အဖေ၊ ဘေးချေ (ဦးလေး) တို့ ဆို ဘယ်အချိန် ရေတက်၊ ရေကျမယ်ဆိုတာ အတိအကျ သိတယ်။ ဘားဟာဘားမြို့သမိုင်းကြောင်းကို ရှင်းပြတော့ ဓာတ်ပုံချည်း ဖိရိုက်နေပြန်၊ နည်းနည်းလည်းဝေးတော့ မကြားလိုက်ဘူး။ ဘားဟာဘားမြို့ က Jackson Laboratory အကြောင်းကိုတော့ မှတ်မိတယ် ကိုယ့်ကို အင်တာဗျုးခဲ့တဲ့ ကုမ္ဗဏီကိုး။ ဂျက်ဆန်လက်ဘော်ထရီက ဓာတ်ခွဲခန်းမှာသုံးတဲ့ ကြွက်တွေကို ရောင်းချတဲ့ သုတေသန ကုမ္ဗဏီပါ။ ကင်ဆာဆေးကို ကြွက်တွေမှာ အရင်စမ်းသပ်၊ အောင်မြင်တော့မှ လူတွေကို ကုသတာမို့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေအတွက် ကြွက်တွေက မရှိမဖြစ် အရေးပါပါတယ်။ ကြွက်ဆိုလို့အမွှေးထောင်ထောင်နဲ့မြေကြွက်မည်းမည်းလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး ကြွက်ဖြူလေးတွေပါ။ ဒီတော့ MDI ( Mount Desert Island) မှာ ကြွက်တွေ အများကြီး ရှိနေတာ အံ့သြစရာ မဟုတ်ဘူး။
တောင်တက်ဝါသနာပါသူတွေအတွက်ဆို MDI trails တွေကို စိန်ခေါ်ကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ တချို့ နေရာတွေ ကျောက်တောင်တွေကို ခဲရခဲဆစ် တက်ရတာတဲ့။ လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ မှာ တွေ့ လို့မိတ်ဆွေဖြစ်၊ ကိုယ်တို့Cold Springs မှာ တောင်သွားတက်တော့ အသေအချာ လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ စီပီအေ CPA ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တောင်တက်သမားကြီး ဒေးဗစ်ကို သတိရကြတယ်။ ဒေးဗစ်သာဆိုရင် နိပ်သဟ ကြိတ်လိုက်စမ်းမယ်လို့တွေးမလားမသိ။ ကိုယ်တို့ ကတော့ ကိုယ်တို့ Level မဟုတ်ဘူးမှန်း အတိအကျသိတယ်။ မိန်းပြည်နယ်ကိုရောက်ရင် မဖြစ်မနေစားဖို့တိုက်တွန်းကြတာက လော့စတာရိုး Lobster Rolls ၊ လော့စတာအိုက်စ်ခရင် Lobster Icecream ( လော့စတာက အနံ့ပါတယ်ဆိုရုံလောက်ပဲ ထင်ပါရဲ့ )၊ ဘလူးဘယ်ရီပိုင်း Blueberry Pie ၊ ဘလူးဘယ်ရီဆိုဒါ Blueberry Soda ၊ ဘလူးဘယ်ရီဘီယာ Blueberry Beer ပါ။ လော့စတာဖမ်း လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေဟာ လိုင်စင်ဆောင်ရပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရေအတွက်ပဲ ဖမ်းခွင့်ရှိပါတယ်။ ဖမ်းမိတဲ့ လော့စတာကို မျက်စိနားကနေ ခန္ဓာကိုယ်ကို တိုင်းလို့သုံးလက်မထက် သေးနေရင်၊ ကြီးနေရင် ၊ ဥတွေရှိနေရင် ဖမ်းယူခြင်းမပြုဘဲ ပင်လယ်ထဲကို ပြန်လွှတ်ပြီး မိန်းပြည်နယ်ရဲ့လော့စတာ သဘာဝဂေဟစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းပါတယ်တဲ့။
မြန်မာ့ရေပြင်ပိုင်နက်မှာ ယိုးဒယားငါးဖမ်းသင်္ဘောတွေ ဂျမ်းပိုက်နဲ့ ငါးမှုန်ငါးစတောင် မကျန်စေရ၊ ဒိုင်းနမိုက်ဖောက်ပြီးဖမ်းတယ်လို့အဖေ ပြောပြဖူးတာ သတိရမိသွားတယ်။ ဟိုးက အစိမ်းရောင်၊ အနီရောင်ဘော့သီးတွေက ဘာတွေလဲဟင်။ အဲဒါ လော့စတာဖမ်းတဲ့ဟာတွေ ဖြစ်မယ် အရောင်တွေက ဘယ်သူ့ ဟာဆိုတာ ခွဲထားတာ။ ဟိုင်းကြီးချောင်းထဲမှာ ငါးဖမ်းဖို့ပိုက်ချထားတဲ့ ဘော့သီးတွေ အမြဲတွေ့ ရတတ်တာကိုး။ မော်တင်စွန်းဘုရားပွဲချိန်ဆိုရင် ရေကြောင်းဦးစီးဋ္ဌာနက ရေကြောင်းလာတိုင်းပြီး ဘောတို်င်အနီ၊ အဖြူတွေ ထောင်ထားလေ့ရှိတယ်။ ဒီဒေသမှာ သွားလာနေတဲ့ သင်္ဘောတွေကတော့ ဘယ်နေရာမှာ သောင်၊ ကျောက်ဆောင်ရှိတယ်၊ ရေတက်ချိန်၊ ရေကျချိန် ရေစူးဘယ်လောက် သင်္ဘောဝမ်းနဲ့လွတ်မလွတ်သိတယ်။ မော်တင်ဘုရားပွဲချိန်မှ ပြေးဆွဲတဲ့ သဘောင်္တွေက ဒီလောက်ဘောတိုင်အနီ၊ အဖြူပြထားတာတောင် ရေကြောင်းမသိလို့သောင်မှတင်ရတာနဲ့ ၊ ဒီရေမတက်သေးလို့အဝမှာ စောင့်နေရတာနဲ့ ။
ငယ်ငယ်တုန်းက မော်တင်စွန်းဘုရားပွဲမှာ ဘောကွင်းနဲ့ရေကူးခွင့်ပြုတယ်။ အရက်မူးမူးနဲ့အိပ်ပျော်သွားရင်း ပင်လယ်ဖက်ကို မျောပါသွားလို့စက်လှေနဲ့လိုက်ဆယ်ရတာများလို့နောက်တော့ ရေကူးခွင့် ပိတ်လိုက်တယ်။ ဇီးချိုင်ဖက်ခြမ်းမှာတော့ ခွင့်ပြုတယ်။ ဇီးချိုင်ဖက်ခြမ်းရေက ပိုပြာတယ်လို့ထင်မိတယ်။ ဒီရေကလည်း ကမ်းခြေဖက်ကို စီးတာဆိုတော့ အဲဒီဖက်ခြမ်းက နည်းနည်းဘေးကင်းတယ်။ မော်တင်စွန်းဘုရားရှိတဲ့ မြန်မာပြည်အနောက်တောင်ဖက်အစွန်း နဂရေ့ အငူက ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကမ္ဗလီပင်လယ် ဆုံတဲ့နေရာဆိုတော ရေစီးကြမ်းတယ် ဝဲတွေနဲ့ ။ သဘောင်္တွေ မော်တင်စည်းကို ဖြတ်ဖို့ ဆိုတာ အတော်ခက်တယ်။ စက်လှေကလည်းတောင့်၊ ဆလင်ကလည်း အတွေ့ အကြုံများတဲ့လူဖြစ်မှ ဖြတ်နိုင်တာ။ လှိုင်းပုတ်လို့စက်လှေက လူးလွန့် တော့ ဂိုက်က သတိထားပါ၊ ကိုင်ထားပါလို့ အော် ခရီးသည်တွေကလည်း ယိမ်းယိုင်နေလို့ အနီးအနားက လက်ရန်းတိုင်တွေကို ဖက်ထားရတယ်။ အမယ်မင်း ဟိုင်ကြီးကျွှန်းနား ရောက်ခါနီးရင် လှိုင်းပုတ်သလိုမျိုးပါလား။
အိမ်ကြီးရခိုင်တွေက လှလိုက်တာ။ ရှေ့ မှာ ကျယ်ပြန့် တဲ့ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်း၊ မြစ်၊ တောတောင် ကိုယ်စိတ်ကူးထဲက အိမ်တွေပါလား။ ဂိုက်က မှန်ပြောင်းထုတ်ပြီး သိမ်းငှက်ရှိမရှိ ရှာဖွေတယ်။ ဟိုနားမှာ ခေါင်းဖြူဖြူနဲ့သိမ်းငှက်။ ခရီးသည်တွေအားလုံး သိမ်းငှက် ရှာဖွေရေး စကြတယ်။ တွေ့ တဲ့သူက အော်၊ ကင်မရာတွေ တဖျပ်ဖျပ်ရိုက်ကြ၊ သိမ်းငှက် ကောင်းကင်မှာ ပျံဝဲပြီး ရေအောက်က အစာကို သုတ်ယူပြီး ကျောက်ဆောင်ကို ယူသွားတယ်။ ဂိုက်က လူကြီးမင်းတို့ကံကောင်းတယ် သိမ်းငှက်ကို တွေ့ ရတဲ့အပြင် အစာဖမ်းနည်းကို သရုပ်ပြသွားလို့ တဲ့။ ဝက်သစ်ချပင် ထူထူအုပ်တွေကြားက ကျောက်ဆောင်စွန်းမှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အပန်းဖြေရိပ်သာအိမ်တစ်ခု ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးက တိုင်တန်းနစ်သင်္ဘောမှာ သေကံမရောက် အသက်မပျောက်တဲ့သူပါတဲ့။ သူ့ အမျိုးသားကတော့ တိုင်တန်းနစ်မှာ ဆုံးပါးသွားပြီ နောက်ထပ် အိမ်ထောင်မပြုဘဲ ဒီအိမ်မှာပဲ သေတပန် သက်တဆုံး နေထိုင်သွားပါသတဲ့။
အဲဒီအိမ်ကတာ့ အိပ်ခန်းဘယ်နှစ်ခန်း၊ ဧည့်သည်အိပ်ခန်း ဘယ်နှစ်ခန်း၊ ဘယ်လိုမျိုး ကောင်းတယ်။ ခုလက်ရှိ ပေါက်ဈေးက ၇ သန်းလို့ဂိုက်က ရှင်းပြတော့ ခရီးသည်တစ်ယောက်က ဟင် ခုနစ်သန်းထဲ7millions Only ပြောတော့ အားလုံးပွဲကျသွားတယ်။ ဂိုက်က အဲဒီစကားလုံးလေး ကြိုက်တယ် ခုနစ်သန်းထဲ I like that word Only ။ Egg Rock မီးပြတိုက်မှာ အရင်တုန်းက လူတွေနေပေမဲ့ ခုတော့ မနေတော့ဘူးတဲ့။ မီးပြတိုက်ကတော့ ခုတိုက် အသုံးပြုနေဆဲပါ။ မီးပြတိုက်နားက ကျွှန်းလေးမှာ ဇင်ယော်ငှက်တွေ၊ ပင်လယ်ဖျံတွေ တွေ့ တော့ ဂိုက်က Happy, healthy, lazy sealions လို့ပြောသွားတာလေးကို သဘောကျမိတယ်။ ဝေလငါး ကြည့်ဖို့ ဆိုရင် နောက်ထပ် မိုင် ၃၀ လောက် သွားရမှာပါတဲ့။ ရှားပါးတဲ့ ငှက်မျိုးစိတ်၊ ဆောင်းခိုငှက်တွေအကြောင်း ရှင်းပြပေမဲ့ မမှတ်မိလိုက်ဘူး။
အပြန်ကျတော့ အေးလာလို့တော်တော်များများ အောက်ထပ်ဆင်းသွားကြတယ်။ ဂိုက်က လော့စတာဖမ်းတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြတယ်။ ဟိုင်းကြီးဖက်မှာတော့ ဂဏ္ဏန်းဖမ်းတဲ့ဟာကို ဂဏ္ဏန်းထောက်လို့ခေါ်ကြတယ်။ လေးကိုင်းသဏန် ဝါးခြမ်းပြားထိပ်မှာ ဂဏ္ဏန်းစာ ချိတ်ထားပြီး အောက်ဖက်မှာ ပိုက်စိတ်စိတ်နဲ့ကာထားတယ်။ ဂဏ္ဏန်းဟပ်နေပြီလို့ ထင်ပြီး ကြိုးကို ဆွဲတင်လိုက်ရင် ဂဏ္ဏန်းက အစာအောက်မှာ ကာထားတဲ့ပိုက်ထဲ ပါလာရော။ တခါတလေ အစားသာကုန်သွားတယ် ဂဏ္ဏန်းတကောင်မှ မမိလိုက်တာမျိုးလည်း ရှိတယ်။ လော့စတာချောက်က သံဇကာကွက် လေးထောင့်ပုံးသဏ္ဍန် အပေါ်ထပ်မှာ လော့စတာအစာ ချိတ်ထားတယ်။ လော့စတာက အင်တန်နာကနေ မစင်စွန့် ပါတယ်တဲ့။ တခါတုန်းက မိတဲ့ လော့စတာ ဘယ်လောက်ကြီးလဲဆို လက်မကတင် ကိုယ်တို့ မျက်နှာ နီးပါးလောက် ရှိတယ်။ မကြာသေးခင်ကပဲ ရာဟူးသတင်းမှာ ရှားပါးလော့စတာ ဖမ်းမိတဲ့အကြောင်း ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။ အက်ကေဒီယားနေရှားခရူကို သဘောကျရင် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကို ပြောပြပေးဖို့ ၊ TripAdvisor မှာ ကွန့် မန့် ပေးဖို့ပြောပါတယ်။ တစ်ဖ်ပေးချင်ရင် ဝါးဗူးထာင်းထဲ ပေးလို့ ရပါတယ်ဆိုလို့၂ ကျပ်ကြီးများတောင် တစ်ဖ်ပေးခဲ့တယ်။
ကက်လက်တောင်ကို မိနစ် ၂၀ လောက် မောင်းရပါတယ်။ တောင်တက်လမ်းတွေက မက်စောက်ပြီး ၁၅၂၈ ပေမြင့်လို့ဟန်ကွတ်ကောင်တီ Hancock County မှာတော့ အမြင့်ဆုံးတဲ့။ ပြင်သစ်လူမျိုး နယ်မြေသစ်ရှာဖွေသူ၊ စွန့် စားသူ Antoine Laumet de Cadillac ကို ဂုဏ်ပြုပြီး ကက်လက်တောင်လို့အမည်ပေးထားတာပါ။ အမေရိကန်တွေရဲ့dream car ကက်လက်ကား စထုတ်တော့ နာမည် copy right နဲ့တရားစွဲသေးတယ်ဆိုပဲ။ အမေရိကန်တွေက ကက်ဒီလက်လို့အသံမထွက်ဘဲ ဘာလို့ကက်လက်လို့အသံထွက်ကြပါလိမ့် (အူကြောင်ကြောင် အတွေး) ။ ရုံးပိတ်ရက်ဆို စက်ဘီးကို SUV ကားနောက်မှာတင်ပြီး Mattew Hason Trail မှာ biking ထွက်ချင်တာ၊ ကက်လက်ကား ရူးတာတွေ နယူးယောက်ရောက်တော့ ပျောက်သွားတယ် နယူးယောက်မှာ ကားမှ မလိုတာကိုး။ အင်း ...ကက်လက်ခရေဇီတစ်ယောက် ကက်လက်တောင်ပေါ် ရောက်လို့ကက်လက်တွေ ကြိမ်းကျေသွားပြီလားမသိ။
ကက်လက်တောင်ပေါ်ရောက်တော့ ညနေစောင်း တိမ်ဖုံးနေလို့မှုန်ပြာရီမှိုင်းနေပေမဲ့ တောင်ပေါ်ကနေ ကျွှန်းလေးတွေကို မြင်ရတဲ့ရှုခင်းက သာယာတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း ရူခင်းခံစားဖို့ ထက် ပို့ စ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဓာတ်ပုံအများကြီး ရိုက်ဖို့ က အဓိက။ နေထွက်ချိန်၊ နေဝင်ချိန် အင်မတန် သာယာတယ် ဆိုပေမဲ့ အဲဒီနေ့ က မိုးအုံ့ ပြီး မိုးဖွဲဖွဲလေးရွာလို့ကားဆီကို ပြေးရသေးတယ်။ ညစာကို တရုတ်ဘူဖေးဆိုင်မှာ ဝင်စားပြီး မိန်းပြည်နယ်ရဲ့ မြို့ တော် သြဂတ်စတာ Augusta က Best Western ဟိုတယ်ကိုရောက်တော့ ည ၁၀ နာရီကျော်နေပြီ။ ဘလော့ဂါ မွန်မွန်ယိုကိုက ဝါရှင်တန်ဒီစီကို စီမီနာ တပတ်လာတာ လေဘာဒေးနေ့ မှာ နယူးယောက်ကို လာလည်မှာမို့တွေ့ ချင်တဲ့အကြောင်း ဖေ့ဘွတ်ကနေ သတင်းပေးတယ်။ လေဘာဒေးနေ့ညနေစောင်းမှ နယူးယောက်ကို ပြန်ရောက်မှာမို့တွေ့ ခွင့်မကြုံလိုက်ဘူး။ ဟင်... ရေခဲသေတ္တာမှာလည်း ရေဘူးနှစ်ဗူးပဲ ရှိပါလား ပြောင်ရှင်းနေတာပဲ ပုံမှန်ဆို ဘီယာဘူးတွေ၊ အချိုရည်တွေ ထားပါတယ်။ ဟိုတယ်စားသောက်ဆိုင်က နာမည်ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ မနက်စာကို မနက် ၇ နာရီခွဲလောက်မှာ ဆင်းစားတယ်။
ငှက်ပျောသီးတစ်လုံး၊ ဆန်းကစ်တစ်လုံး၊ လိမ္မော်ရည်တစ်ခွက်၊ ဒိန်ချည်ဗူးသေးတစ်ဗူး၊ ကြက်ဥချိစ်ကြော်၊ အသားတုကင် ၆ ခုလောက် စားတဲ့ကိုယ့်ကို ဝိုင်းက တအံ့တသြဖြစ်လို့ ။ ငယ်ငယ်တုန်းက မကြီးနဲ့မောင်မောင်က တပန်းကန်ပဲ တီးတယ် ကိုယ်က သုံးပန်းကန်တောင် တီးတာလို့အမေ ပြောဖူးတယ် အဟီး။ မိုက်ခရိုဝေ့စ်မှာ ကျေးဇူးပြု၍ ကြက်ဥမကျက်တကျက် မထည့်ပါနဲ့ လို့စာကပ်ထားတယ်။ ကြည့်ရတာ ဟိုတယ်မှာ ဒီလိုကြုံဖူးလို့ နေမယ်။ ပုံမှန်ဆို ရေခဲသေတ္တာမှာ အမျိုးမျိုး ထည့်ပေးထားတယ်ကွ တခုခုတော့ တခုခုပဲ။ မနက်စောစော ချက်အောက်လုပ်တော့ တိုးရစ်တွေက အများကြီး အခန်းစေ့ ဝင်မစစ်နိုင်လို ကိစ္စရှင်းအောင် တခါတည်း ဘာမှမထည့်ထားတာ နေမယ်။ ညက တိုးဂိုက်ပြောတာကြားလား ကိုယ်စားနိုင်လောက်ပဲစား အများကြီး မသယ်ပါနဲ့ တဲ့။ ကိုယ်တို့ ကားပေါ်ရောက်ပြီး မကြာပါဘူး ကော်ဖီခွက်တွေ၊ ပန်းသီး၊ ငှက်ပျောသီးတွေ တပြုံကြီး သယ်တဲ့သူတွေက တရုတ်တိုးရစ်တွေပါပဲ။ တရုတ်အစိုးရက ကိုယ်တိုင်ကတောင် အပြစ်တင်ရလောက်အောင် တရုတ်တိုးရစ်တွေကလည်း ကားလမ်း ဖြတ်ကူးချင်တဲ့နေရာ ဖြတ်ကူး၊ အလကားဆို အကုန်သယ်။ အဆိုးဆုံးတိုးရစ်တွေထဲမှာ ရုရှားက နံပါတ်တစ် ဘာမှဂရုမစိုက်ဘူး၊ ဂျာမန်က ဒုတိယ ကပ်သီးကပ်ဖဲ့ ခေါင်းမာတယ်၊ အမေရိကန်တွေက စတိုင်မကျဆုံးနဲ့အသံအကျယ်ဆုံး၊ တရုတ်နဲ့ဆော်ဒီတွေလည်း အဆိုးဆုံးထဲမှာ ပါတယ်။
မိန်းပြည်နယ် သြဂတ်စတာကနေ ယော့ခ်ကင်းဒမ်းတိရစ္ဆာန်ရုံဆီကို မိုင် ၁၀၀၊ ၂ နာရီ မောင်းရပါတယ်။ လည်ပတ်ဖို့ပေးထားတဲ့ ၁ နာရီမှာ ကိုယ်က စာထိုင်ဖတ်တယ်။ ဝိုင်း မြေပုံကိုင်ပြီး အနှံ့ ပတ်တယ်။ ဘန်ဂေါတိုက်ကျား၊ ကျားဖြူတွေ့ ခဲ့လား၊ သားပိုက်ကောင် တွေ့ ခဲ့လား၊ ဒေါင်း တွေ့ ခဲ့လား မေးတော့ သားပိုက်ကောင် မတွေ့ ခဲ့ဘူးတဲ့။ မြေပုံကို ပြန်ကြည့်တော့ အဲဒီနေရာကနေ ပတ်သွားခဲ့လို့မမြင်ခဲ့တာတဲ့။ ကိုယ့်တုန်းက ၂ နာရီ အချိန်ရတော့ နှံ့ တယ်။ မိန်းပြည်နယ် ယော့ခ်ကနေ မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် ဘော့စတွန်ကို ၆၅ မိုင် ၁ နာရီ ဝေးပါတယ်။ လေဘာဒေးပိတ်ရက်မှာ ဘော့စတွန်တက်ကြတယ်ထင်ပါ့ ကားတွေကြပ်လို့ဘော့စတွန်အဝင် ဆယ်မိနစ်နောက်ကျသွာလို့၁ နာရီခွဲမှာထွက်မဲ့ ဘော့စတွန်ဟာဘားခရူကို ၁၀ မိနစ်လောက် စောင့်ထားပေးဖို့အရင်ရောက်နှင့်နေတဲ့ တိုးဂိုက်ဘော်ဒါတွေက ရီကွတ်လုပ်ထားပေးတာမို့ကားပေါ်ကဆင်းတာနဲ့ဘော့စတွန်ဟာဘားခရူဆီ ပြေးရတော့တာပဲ။
ဟားဘားမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်၊ နာမည်ကြီး Legal Seafood မှာ လော့စတာရိုးနဲ့နယူးအင်္ဂလန်ချောင်ဒါ စားမယ်၊ မြို့ လယ်ကောင်တခွင် ဓာတ်ပုံ ရိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတာ ဆိပ်ကမ်းမှာ ခြေထောက်ကို တွဲလွဲချထိုင်ရင်း တိမ်ဆိုင်ဖြူဖြူကောင်းကင်ပြာပြာ ပင်လယ်ပြာပြာ ဖြတ်သန်းသွားလာနေကြတဲ့ သဘောင်္ ပျံဝဲနေတဲ့ ဇင်ယော်တွေကိုငေး ပင်လယ်လေညင်း ခံရတာကို သဘောကျလွန်းလို့ဘယ်မှကို မသွားချင်တော့ဘူး။ ဓာတ်ပုံလေးရိုက်လိုက် ငေးလိုက်။ ဘေးနားမှာ လာတိုင်တဲ့ ကလေးမလေးကို ရီကွက်လုပ်ပြီး ရိုက်ခိုင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးကို သဘောကျတယ်။ မနက်က အဝတီးထားလို့ နဲ့တူပါရဲ့ဗိုက်ကမဆာ ရှုခင်းကလည်း သာယာလွန်းတော့ ဘယ်မှကို မသွားချင် အဲဒီလိုလေး ထိုင်ငေးနေတာ ၄၅ မိနစ်လုံးလုံးပဲ။ ဝိုင်းက ပြန်ရောက်ပြီလို့ဖုန်းဆက်မှပဲ သူ့ ကိုသွားခေါ် ဓာတ်ပုံအပြေးအလွှားရိုက် 711 မှာ နေ့ လည်စာဝယ်စားဖို့ဂိုက်က မှာထားပေမဲ့ ဝယ်ဖို့ အချိန် မရှိတော့ဘူး။ အိမ်သာအတွက် ရပ်ပေးမဲ့ Rest Area ၊ Gas station မှာ စားစရာ ဝယ်မယ်လို့စိတ်ကူးတယ်။
လေဘာဒေးနေ့ညနေစောင်းမှာ နယူးယောက်ဆီ ပြန်လာကြတော့မဲ့ ကားတွေကို ရှောင်ဖို့နယူးယောက်ကို စောစောဝင်အောင် ဒရိုင်ဘာက အမြန်မောင်းတယ်။ နေ့ လည်စာကတော့ ပါလာတဲ့ ဘီစကွတ်နဲ့ဟိုတယ်က ယူလာတဲ့ ရေဗူးနဲ့ ပဲ ပြီးလိုက်ရတယ်။ နယူးယောက်ကို ဝင်တော့ ညနေ ၇ နာရီခွဲ ။ တော်ပါသေးရဲ့ဂျူလိုင် ၄ တုန်းက ကားကြောပိတ်နေလို့ည ၉ နာရီမှ ဝင်တယ်။ ဝိုင်းနဲ့ခရီးသွားတာ တော်တော်အဆင်ပြေတယ် သူက ကိုယ့်ထက်တောင် တက်ကြွပြီး အပင်ပန်း ပိုခံနိုင်တယ်။ တလတခေါက် ခရီးထွက်ရရင် ကောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးမိတယ်။ ခရီးသွားရင် ပင်ပန်းတယ် ဆိုပေမဲ့ ရေမြေသစ်ကို လေ့လာစူးစမ်းရင်း စိတ်နှလုံးတက်ကြွ လန်းဆန်းတာကတော့ ဘယ်အရာနဲ့ မှ မတူဘူး။ ခရီးတွေက သွားပြီး သွားချင်တုန်းပဲ။ အချိန်၊ ငွေ၊ သူငယ်ချင်း၊ ကျန်းမာရေး အဲဒီလေးခု ပြည့်စုံလို့တောတွေလားဖြစ်နေရင်တော့ တောလားတွေ ရေးတင်ပါဦးမယ်။
စက်တင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၄။
အက်ကေဒီယားသွား တောလား - ၂
နယူးဟမ်ရှိုင်းယားပြည်နယ် နာရှာ Nashua မြို့ က Raddison ဟိုတယ်က မနက်စာ မကျွှေးဘူး။ နာရှာမြို့ ကနေ မိန်းပြည်နယ် ပို့ လန်းမီးပြတိုက် Portland Head Light အထိ ၁၁၅ မိုင် ၂ နာရီ မောင်းရပါတယ်။ ၁၇၉၁ ခုနှစ်မှာ တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့တဲ့ ပို့ လန်းမီးပြတိုက်ဟာ မိန်းပြည်နယ်ရဲ့သက်တမ်းအကြာဆုံး မီးပြတိုက်ပါ။ ၁၇၈၇ မှာ ဂျော့ ဝါရှင်တန်ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၇၉၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၀ မှာ ပြီးခဲ့ပါတယ်။ ဂျော့ဝါရှင်တန်ဆိုတာ ဗြိတိသျှတွေဆီကနေ လွတ်လပ်ရေးရအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်သလို အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံး သမ္မတလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်တွေရဲ့ဟီးရိုးသူရဲကောင်း ဂျော့ဝါရှင်တန်ရုပ်တုကို အမေရိကန်နိုင်ငံတဝှမ်း တွေ့ ရမှာပါ။ အရင်တုန်းက ဝေလငါးဆီကို သုံးခဲ့ပြီး ခုတော့ Fresnel Lens ကို သုံးပါတယ်။ မီးပြတိုက်ရှိတဲ့ နေရာလေးက အင်မတန် သာယာလှပပါတယ်။
ဒီနေရာ၊ ဒီရှုခင်းကို ဒုတိယအကြိမ်ရောက်တာ ဆိုပေမဲ့လည်း ဓာတ်ပုံရိုက်လို့မဝနိုင်ဘူး။ ပထမအကြိမ်တုန်းက တစ်ယောက်တည်း ခရီးသွားတာဆိုတော့ ကိုယ့်ဓာတ်ပုံတွေ သိပ်မရှိဘူး။ ခုတော့ ဝိုင်းနဲ့တစ်ယောက်တလှည့် စိတ်ကြိုက်မရမချင်း ရိုက်။ ဥရောပသားတွေက ခရီးသွားရင် ရှုခင်းကို အပြည့်အဝခံစားတယ် သူတို့ ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတာ ခပ်ရှားရှားတဲ့။ ဝိုင်းနဲ့သူ့ အစ်မတွေ ပြင်သစ်ကို သွားလည်ကြတော့ သူ့ တို့ ညီအစ်မတွေဆိုတာ ရိုက်လိုက်ကြတဲ့ဓာတ်ပုံ။ တစ်ယောက်ချင်းရိုက်လိုက်၊ ညီအစ်မတွေရိုက်လိုက်၊ ဝိုင်းသူငယ်ချင်း ကနေဒါမှာ ကြီးပြင်းတဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံမလေးကို သူတို့ ညီအစ်မသုံးယောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းလိုက်နဲ့ရှုခင်းခံစားဖို့ ထက် ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ပဲ အားစိုက်နေတာတဲ့။ ဘယ်လ်ဂျီယံမလေးကတော့ သူ့ ကိုရိုက်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း အရိုက်မခံ၊ အဆောက်အဦး၊ ရှုခင်းကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း တပုံ၊ နှစ်ပုံလောက်ပဲ ရိုက်တာတဲ့။ ကိုယ်တို့ အာရှသားတွေကတော့ ရှုခင်းခံစားဖို့ ထက် ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ က အဓိက။ ခရီးစဉ်ပြီးတော့မှ ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး ရှုခင်းပြန်ခံစားတာမျိုးလား။
အိမ်သာအတွက် Rest Area မှာ ၁၅ မိနစ် ရတဲ့အချိန် စတားဘာ့ခ်မှာ ဗီနီလာလက်တေးဝယ်ပြီး မနေ့ ညက ဝယ်လာတဲ့ ဂျပန်ဆိုင်က ဖက်ထုပ်ကြော်၊ ဘီစကွတ်လေးနဲ့မနက်စာကတော့ ကသောကမျောပါပဲ။ ပို့ လန်းကနေ မိန်းပြည်နယ် ဘားဟာဘားမြို့ ကို ၁၈၀ မိုင်၊ ၃ နာရီခွဲ မောင်းရပါတယ်။ အရှေ့ မြောက်ဖက်အစွန်ဆုံး ကနေဒါအောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ မိန်းပြည်နယ်ဟာ ဆောင်းတွင်းဆို အင်မတန်အေးပြီး နွေရာသီမှာ အပန်းလာဖြေလာကြတဲ့ ပြည်နယ်လေးပါ။ ပြည်နယ်က ကြီးပေမဲ့ လူရေဦး ၁ သန်းလောက်ပဲရှိပြီး ပြည်နယ်ရဲ့၉၀ ရာခိုင်းနှုန်းက သစ်ပင်တွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတာပါတဲ့။ ကိုယ် ရောက်ဖူးတဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ မိန်းပြည်နယ်က အစိမ်းဆုံး၊ သစ်ပင်အများဆုံး။ လမ်းတလျှောက် pine tree တွေ တွေ့ ပါတယ်။
သမ္မတအိုဘားမား မနှစ်တုန်းက ဘားဟာဘားကို အပန်းဖြေခရီးထွက်တော့ အဲဖို့ ဒ်ဝမ်းလေယာဉ် ဒီ Hancock County - Bar Harbor Airport မှာ ဆင်းသက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ သမ္မတ William Howard Taft ပြီးရင် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော် ၂၁ ရာစုမှာ ဒီဒေသကို အပန်းဖြေခရီးထွက်တဲ့ ပထမဆုံးသမ္မတက အိုဘားမားပါ။ ဟင် လေဆိပ်ကလည်း သေးသေးလေး။ ဒီတံတားကို ကျော်လိုက်တာနဲ့မိန်းပြည်နယ်ထဲရဲ့အကြီးဆုံးကျွှန်း၊ အက်ကေဒီးယား အမျိုးသားဥယျာဉ် Acadia National Park ၊ ဘာဟားဘား Bar Harbor မြို့ ရှိတဲ့ Mount Desert Island (MDI) ကို ရောက်ပါပြီ။ ပင်လယ်ရေပြာပြာ တောတောင်စိမ်းညှို့ ညှို့ နဲ့အင်မတန် သာယာပါတယ်။ ဂျူလှိုင် ၄ လာတုန်းက မိုးတွေသည်းနေတော့ ဒီလောက်သာယာမှန်း သတိမထားမိခဲ့။ ဝါဘနကီ Wabanaki အင်ဒီယန်းတွေက MDI ကို Pemetic လို့ခေါ်ပါတယ်။ Range of Mountains ၊ Mountains seen atadistance လို့အဓိပ္ဗာယ်ရပါတယ်။ ဝါဘနကီအင်ဒီယန်းတွေက ရာသီအလိုက် ငါးဖမ်း၊ အမဲလိုက်၊ ဘယ်ရီခူးပါတယ်။ ၁၆၀၄ စက်တင်ဘာလ အစောပိုင်းမှာ ပြင်သစ်လူမျိုး နယ်မြေသစ်ရှာဖွေသူ Samuel de Champlain က ကျောက်ဆောင်တွေကြား သွားလာ၊ လှေကိုပြင်ဖို့ကမ်းခြေကိုလာတော့ ဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ ပါတယ်။
ချန်ပိန် Champlain က ပြင်သစ်လို Isles des Monts Deserts (islands of barren mountains) နာမည်ပေးခဲ့တာ ခု Mount Desert Islands လို့ခေါ်ကြတဲ့ ကိုယ်တို့ခုရောက်နေတဲ့ မိန်းပြည်နယ်က အကြီးဆုံးကျွှန်းကြီးပါ။ ၁၈၈၀ မှာ ဟိုတယ် ၃၀ ရှိနေပြီး တိုးရစ်တွေဟာ မြင်းလှည်း၊ ရထား၊ ဖယ်ရီတွေနဲ့လာကြပါသတဲ့။ Standard Oil Company ပိုင်ရှင် Rockefeller မိသားစုက အက်ကေဒီးယားအမျိုးသားဥယျာဉ်မြေ သုံးပုံတပုံကို လှုဒါန်းပြီး တောင်တက်၊ စက်ဘီးစီးတဲ့လမ်းတွေကို ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မက်ဟန်တန်ဆီ နေ့ တိုင်း မြေအောက်ရထားစီးရင် 47- 50 st Rockefeller Center လို့ကြေငြာသံ ကြားရပါတယ်။ ခရစ်စမတ်ဆို နယူးယောက်မှာ အကြီးဆုံးခရစ်စမတ်သစ်ပင်လို့ဆိုကြတဲ့ Rockefeller Center ကရှေ့ က ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကြီးနားမှာ လူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတာပဲ။ မနှစ်က ရာသီဥတုတော်တော် အေးတာတောင် အဲဒီရော်ခါဖယ်လာခရစ်စမတ်သစ်ပင်ဆီ သွားတိုးလိုက်သေးတယ်။ နယူးယောက်မှာနေပြီး ခရစ်စမတ်ချိန်မှာ ရော်ခါဖယ်လာဆီ သွားမတိုးရင် ခေတ်နောက်ကျပေသကိုး။
၁၇၆၃ မှာ ဥရောပက Isreal Higgins တွေ အခြေချနေထိုင်ပြီး နောက်ပိုင်း အင်္ဂလိပ်တွေ အခြေချလာတယ်။ ငါးဖမ်း၊ သစ်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ကြတယ်။ Vanderbilt ၊ Morgan (J.P Morgan, Chase Bank) ၊ Carnegie ၊ Astor မိသားစုတွေ နွေရာသီ အပန်းဖြေကြတဲ့ နေရာပါ။ ၁၉၄၇ အောက်တိုဘာလယ်မှာ တောမီးလောင်လို့အက်ကေဒီးယားအမျိုးသားဥယျာဉ်ရဲ့ဧကတစ်သောင်းကျော် ပျက်စီးခဲ့တယ်။ ဒီတခေါက် ဂိုက်က ပိုရှင်းပြတယ်။ ဘားဟာဘားကိုရောက်တော့ နေ့ လည် ၂ နာရီ ထိုးလုပြီ။ ၁ နာရီခွဲ အချိန်ပေးပြီး ၃ နာရီခွဲ စုရပ်မှာ ပြန်ဆုံရမှာ။ ဘားဟာဘားကတော့ အပန်းဖြေသင်္ဘောတွေ၊ အပန်းဖြေကြသူတွေနဲ့စည်ကားနေတာပဲ။ ဂိုက်က နာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်ကို ခေါ်သွားတယ်။ အဲဒီက လော့စတာ Lobster ၊ နယူးအင်္ဂလန်ချောင်ဒါ NewEngland Chowder နာမည်ကြီးတယ်။ မိနစ် ၂၀ လောက် စောင့်ရမယ်ဆိုတော့ ဒီလောက်အဝေးကြီးကိုလာပြီးမှ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကို စားသောက်ချိန်ဆိုင် စောင့်ရင်းကုန်သွားမှာ နှမြောစရာကြီး။ ဟိုနားမှာ Lobster Rolls take out လေး ဝယ်၊ နေ့ လည်စာအတွက် ဆယ်မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီး ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ ဓာတ်ပုံသွားရိုက်ရအောင်။ Great Idea ! ။
လော့စတာရိုးက ၁၈ ကျပ်တောင် ပေးရတော့ ဈေးကြီးတယ် ဒါပေမဲ့ စားလို့ အတော်ကောင်းတယ်။ ကမ်းနားက ထိုင်ခုံမှာထိုင် စိမ်းညှို့ တဲ့ကျွှန်းတွေ၊ သင်္ဘောတွေ၊ ပင်လယ်ပြာပြာတွေကို ငေးပြီး အရသာရှိတဲ့ လော့စတာရိုးစားရတာ ကောင်းလိုက်ပါဘိ။ ဘတ်စ်ကားမှာ မျက်မှန်းတန်းမိနေတဲ့ အန်တီသုံးယောက်က လာထိုင်ပြီး ဘယ်မှာဝယ်တာလဲ၊ ဘာလူမျိုးလဲလို့ မေးတော့ ဝိုင်းက သူက Burmese လို့ဆိုတော့ Burmese မြန်မာစကားပြောတတ်လား၊ ရန်ကုန်ကလား၊ ကျောင်းလာတက်တာလားနဲ့တယောက်တပေါက် ကိုယ့်အကြောင်းကိုမေး သူတို့ ဗျူးတာဖြေရတာနဲ့သူတို့ ကိုတောင် မဗျူးလိုက်ရဘူး။ တရုတ်လို မပြောတတ်ဘူးလား နည်းနည်းပဲသိတယ်။ ကွမ်တုန်ဘာသာစကား ပြောတတ်လား ဟင့်အင်း။ ဗီယက်နမ်မလေးကရော တရုတ်လို၊ ကွမ်တုန်လို ပြောတတ်လား ဟင့်အင်း။ ဒါဖြင့် မင်းတို့ ဘယ်လိုပြောလဲ အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာပေါ့။ မနေ့ က မြန်မာစကားကြားလိုက်တာ သူတို့ တွေပေါ့။ ကိုယ်တို့တယောက်တလှည့် ဓာတ်ပုံရိုက်နေတာကို အဘုိုးကြီးတစ်ယောက်က နှစ်ယောက်တွဲဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရမလားဆိုပြီး ရိုက်ပေးတယ်။ ထိုင်နေတဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်းကိုလည်း ကိုယ်တို့ အထုပ်တွေ ကိုင်ခိုင်းလိုက်သေးတယ်။ အဘိုးကြီးကိုတလှည့် သူတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကို ရိုက်ပေးရမလားမေးတော့ နှစ်ယောက်လုံးက နိုးဆိုပြီး လက်ကာပြတော့ ရယ်လိုက်ရတာ။
ကိုယ်က အဲဒီအစ်မကို အားကျတာကွ။ အသားဖြူဖြူ၊ အရပ်ရှည်ရှည်၊ အမြဲတမ်း လှနေတာ။ အဝတ်အစား ဝတ်တာလည်း ကလက်တက်တက် မဟုတ်ဘဲ သူ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း၊ ဓာတ်ပုံတွေဆို ကိုယ် သိပ်သဘောကျတာ။ ကိုယ်လည်း သူ့ လိုပို့ စ်လေး ရိုက်ချင်လိုက်တာ။ ခရီးအမြဲသွားတာကိုလည်း အားကျတယ်။ အဝတ်အစားဒီဇိုင်းချင်း အတူတူ၊ ပို့ စ်အတူတူ ပေးတာတောင် အဲဒီအစ်မက ပိုလှနေတယ်ဟဲ့။ အဲဒီအစ်မ ပို့ စ်လေးမိုက်တယ် အဲဒီလိုလေး ရိုက်ကျရအောင်။ ဆူနမ်က ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် လက်နှစ်ချောင်း အမြဲထောင်တတ်တယ်။ ရာမားက အဲဒီလက်နှစ်ချောင်းကို ဖျပ်ရိုက်တတ်တယ်။ တခါတလေ ဆူနမ်က သူ အဝေးကို ငေးနေတဲ့ပုံ ရိုက်ခိုင်းတတ်တယ်။ ကိုယ်ကတော့ တခါမှ အဲဒီလို မရိုက်ဘူးဖူး။ အဲဒီအစ်မကို အားကျလို့နောက်ကျောကနေ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတယ်။ ၃၆၀ ဒီဂရီဆိုပြီး ပို့ စ်ပေးတဲ့သူက နေရာမရွေ့ဖိုတိုဂရပ်ဖာက ၃၆၀ ဒီဂရီပတ်ပတ်လည်ကနေ ရိုက်တယ်။ ပန်းအိုးလေးနဲ့ခရူသင်္ဘောရိုက်ရင် ကောင်းမယ်လို့တွေးနေတာ ဝိုင်းက သူလည်း အဲဒီလို တွေးနေတာတဲ့။
The more further, the more prettier. မမြင်ရလေ ပိုလှလေ... :)
Lobster Steal Cruise မှာ ဂို်က်က ရှင်းပြတဲ့ လော့စတာဖမ်းတဲ့ အကြောင်း၊ Cadillac Mountain သွားတဲ့အကြောင်းကတော့ နည်းနည်းရှည်မှာမို့အပိုင်း ၃ မှာမှ ဆက်ပါဦးမယ်။
စက်တင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၄။
အက်ကေဒီယားသွား တောလား - ၁
အာရှမှာတော့ အလုပ်သမားနေ့ရုံးပိတ်ရက်က မေလ ၁ ရက် အမေရိကန်မှာတော့ စက်တင်ဘာ ၁ ရက် မေဒေးလို့မခေါ်ဘဲ လေဘာဒေးလို့ခေါ်ပါတယ်။ လေဘာဒေး ရုံးပိတ်ရက်က တနင်္လာနေ့ မို့ရုံးပိတ်ရက် ၃ ရက်တောင် ရတာမို့ခရီးသွားကြတဲ့အချိန် ဆိုပါတော့။ အက်စ်စတိတ် Upstate လို့ ခေါ်ကြတဲ့ နယူးယောက်မြို့အထက်ပိုင်းက Fingers Lake ၊ Lake George ၂ ရက် ခရီးစဉ် သွားရကောင်းမလား စဉ်းစားနေတာ Meetup လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ မှာ အပတ်တိုင်းဆုံပြီး အသိမိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်လာပြီးတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက်က Cold Springs ၊ Bear Mountain ကို အတူတူ တောင်သွားတက်ခဲ့ကြတဲ့ ဗီယက်နမ်မလေး ဝိုင်းက Fingers Lake ခရီးစဉ်က ၂ ရက်တည်းဆိုတော့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေပိတ်ရက်တွေမှာ သွားလို့ ရတယ်၊ ၃ ရက်တောင် ပိတ်တာ အက်ကေဒီးယားကို သွားရအောင်လို့ပြောလာတော့ ဂျူလှိုင် ၄ ပိတ်ရက်တုန်းက မိန်းပြည်နယ်သွား တောလားခဲ့ပေမဲ့ အာသာမုန်တိုင်းကြောင့် အက်ကေဒီယားကို မသွားလိုက်ရလို့မကျေမနပ်ဖြစ်နေတဲ့သူက နင်လားဟဲ့ အက်ကေဒီးယား မရောက်ရောက်အောင် လာမယ်လို့ကြုံးဝါးတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ဒုတိယမ္ဗိ မိန်းပြည်နယ်သွား တောလားခဲ့ရပြန်ပေါ့ တစ်ခါ။
မြို့ ကြီးတမြို့ကို ဖြတ်သန်းသွားတော့ ဘာမြို့ ပါလိမ့်လို့ဂူဂယ်မြေပုံမှာ ရှာနေတုန်း ဒီမြို့ က ကွန်နက်တီကပ် Connecticut ပြည်နယ်ရဲ့Fortune 500 ၊ 1000 ၊ 13 Courant 100 ကုမ္ဗဏီတွေရှိတဲ့ စတန်းဖို့ ဒ် Stamford မြို့ ပါတဲ့။ နယူးယောက်မြို့ ရဲ့မနီးမဝေး မိုင် ၃၀ ၊ နာရီဝက်သာသာ အဝေးက စီးပွားရေးတောင့်တဲ့ financial district မြို့ ဆိုပါတော့။ စတန်းဖို့ ဒ်ကနေ နယူးယောက်ကို ရထားစီး ရုံးတက်ကြတယ်။ နာမည်ကျော် ယေးလ်တက္ကသိုလ် Yale University ရှိတဲ့ နယူးဟေဗင် New Haven မြို့ က စတန်းဖို့ ဒ်မြို့ နားမှာပါ။ ကွန်နက်တီကပ်ပြည်နယ်မှာ ယေးလ်တက္ကသို်လ်ရှိတယ်၊ နာမည်ကြီး ကာဆီနို ၂ ခု ရှိတယ်၊ မြေပိုင်ရှင် အိန္ဒိယသူဋ္ဌေးတွေက သူတို့ မြေပေါ်မှာ ဟိုတယ်၊ ကာဆီနို ဆောက်ကြတယ်။ အမေရိကန်စာရေးဆရာ မက်ခ်တွိုင်း Mark Twain ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေကို ကွန်နက်တီကပ်ပြည်နယ်မှာ ကုန်လွန်ခဲ့တယ်လို့ဂိုက်က ပြောပြပါတယ်။
Concrete jungle New York City
ကွန်နက်တီကပ်ပြည်နယ် မက်စ်တစ် ရေသတ္တဝါပြတိုက် Mystic Aquarium ကို ဝင်လည်ကြတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ဂျူလှိုင် ၄ တုန်းက ရောက်ခဲ့ပြီးသားမို့ လို့အဲဒီနားက Mystic Village ဆိုတဲ့ လျှောပင်းအိမ်လေးတွေကို ဝင်လည်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘုရားရုပ်တုတွေ့ လို့ဝင်ကြည့်တော့ ဒလိုင်းလားဘား ဓာတ်ပုံအကြီးကြီး ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ တိဘက်ဆို်င် ဖြစ်နေတယ်။ ဂီနေရှားနတ်၊ ဥူံ၊ ပုတီး၊ လွယ်အိတ်၊ ပုဝါ အဆင်အသွေး၊ ဒီဇိုင်းတွေက ကိုယ်တို့ အာရှယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုးကွယ်မှု အငွေ့ အသက်တွေ။ ကြေးဖလားထဲ ကျည်ပွေ့ အသေးလေး ထည့်ထားတာကို ဘယ်လိုနေရာမှာ သုံးတာလဲလို့ဆိုင်ရှင်ကို မေးကြည့်တော့ တရားထိုင်ရာမှာ သုံးတာတဲ့။ ကြေးဖလားကို ယူပြီး ကျည်ပွေ့ လေးနဲ့တချက်ထုပြတယ်။ ကြေးဖလား ပတ်ပတ်လည်ကို ကျည်ပွေ့ လေးနဲ့ ထုပြတယ်။ ပလွေမှုတ်သလိုပေါ့ မမှုတ်တတ်တဲ့သူဆို ပီ...ပီ..လို့ ပဲ မြည်နေတာ မှုတ်တတ်တဲ့သူကျတော့ သာယာနာပျော်ဖွယ် ကောင်းနေရော။ ဒီကြေးဖလားလည်း ဒီအတိုင်းပဲ စည်းဝါးတကျတီးရင် အင်မတန် သာယာတာ။ ဒီကြေးဖလားက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်တွေနဲ့သွန်းထားတာ။ ရေ၊ လေ၊ မီး ဓာတ်ကြီးလေးပါးကို ဆိုလိုတာလား။ မဟုတ်ဘူး ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ သံဓာတ်၊ ဘာဓာတ်၊ ညာဓာတ်တွေ။
တရားထိုင်ဖို့ ဆို်ရင် စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်။ စ်ိတ်တည်ငြိမ်အောင် ဒီကြေးဖလားလေးနဲ့စုစည်းတယ် ဆိုပါတော့။ သြော် ကျေးဇူးပါပဲ။ ဆန်းပြားတဲ့ ဆွဲကြိုး၊ လက်ကောက်၊ နားကပ်၊ လက်စွပ်တွေကို ကိုင်ကြည့်လိုက်၊ ဈေးကြီးလို့ပြန်ချလိုက် လုပ်နေတဲ့ ကိုယ့်ကို ဟေ့ မင်း ဘာလူမျိုးလဲ မြန်မာ။ ဒါဆို ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့ ဟုတ်တယ်။ ငါတုို့ က မဟာယန စိတ်ကို အဓိက ဇောင်းပေးတယ် မင်းတို့ က အပြင်ဖက်ကို ဇောင်းပေးတယ်။ ခဏလေး တွေ့ ရတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့အငြင်းအခုန် မလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။ ဒီလက်စွပ်ရဲ့စာသားလေးက ဘာလဲဟင်။ အဲဒါ ဥုံ (အုန်) လို့အသံထွက်တယ် သြော် ဥုံဘာနီ ဘာဒမ်ဥုံ ကိုယ်ရဲ့အသံထွက်မှားကို သူက အမှန်ဆိုပြသွားတယ်။ ဥုံ မဏိပဒ်မဟေုံ (ဥုံဘာနီ ဘာမမ်ဥုံ ) ကို ကိုယ် ဘယ်လိုလုပ်သိတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး ပြောပြပါရစေ။ ၁၉၉၉ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးခါစ လှည်းတန်းက ဆရာကြီးဦးမြကြိုင် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း တက်တော့ မနက် ၈ နာရီ အတန်းမစခင် May you be free from suffering အင်္ဂလိပ်လို မေတ္တာပို့ တာလေး ဖွင့်ထားလေ့ရှိတယ်။ နားထောင်ရတာ စိတ်ချမ်းသာလို့အခွေဝယ်ရင် ကောင်းမလားလို့တိုင်ပင်တော့ အင်္ဂလိပ်လို မေတ္တာပို့ တာ နတ်တွေက နားလည်ပါ့မလားဟယ် ဆိုတာနဲ့မဝယ်ဖြစ်တော့ဘူး။
ကန်တက်ကီမှာ လေးအော့ဖ်လို့ဆူနမ်တို့ ရှိတဲ့ မေရီလန်းကို ပြောင်းကာအလုပ်ရှာ၊ ၂ လခွဲနဲ့အလုပ်မရတော့ ကျောင်းကိုပြန်ပြီး Seminar သင်တန်း သုံးပတ်တက်၊ ကျောင်းကိုရောက်ပြီး တပတ်အကြာ ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ အလုပ်ရ၊ ကယ်ပီတယ် Capitol နားက ဒီစီရုံးလေးကို သဘောကျနေတုန်း Government Shutdown ဖြစ် ကလိုင်းရင့် ဒီအိုအယ် Department Of Labor က ကွန်းထရပ် ထပ်မတိုးလို့ဒီစီရုံးကို ပိတ်လိုက်လို့လေးအော့ဖ်ထိပြန်။ ၁၃ က ကိုယ့်ရဲ့ လက်ကီးဂဏ္ဏန်းလို့ယူဆပေမဲ့ ၂၀၁၃ ကတော့ ကံကောင်းတဲ့နှစ် မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ Student Loans ကျောင်းလခ၊ အိမ်လခ၊ ဖုန်းဘေလ်၊ ကားဘေလ် အဲဒီဘေလ်တွေကို မှန်မှန်ပေးနိုင်ပါ့မလား၊ အလုပ်က ဘယ်တော့၊ ဘယ်မှာ၊ ဘယ်တော့များမှ ရပါ့မလဲနဲ့ပူရတာ။ အဖေ၊ မကြီးက ပိုက်ဆံကိစ္စအတွက် လုံးဝစိတ်မပူနဲ့ လို့ပြောပေမဲ့ ပူတာပါပဲ။ ဒီလိုပူနေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်သီချင်းကိုမှ မခံစားနိုင်ဘူး။ Yiruma ၊ Joe Hisaishi ရဲ့ပီယာနိုလက်သံတွေလည်း မအေးချမ်းစေနိုင်ခဲ့ဘူး။ စိတ်ငြိမ်းချမ်းစေတဲ့ Mentra ၊ Chant သီချင်းတွေ လိုက်ရှာတော့ Imee Ooi ရဲ့The Chant of Metta ကို သွားတွေ့ တယ်။ အိုး... လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်တုန်းက ကိုယ်ဝယ်ချင်တဲ့ သီချင်းလေးပါလား။
ဆူနမ်တို့ဖွင့်တဲ့ နီပေါသီချင်းတွေ အကြောင်း ပြောကြရင်း သူတို့ ဆီမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ သီလရှင်ဆရာလေးတစ်ပါးရဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်က နာမည်ကြီးသွားလို့ကမ္ဘာအနှံ့ က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ သူ့ ကိုပင့်ဖိတ်ပြီး ဆိုခိုင်းရတယ်။ ဟင် သီလရှင်က သီချင်းဆိုတယ် ထေရဝါဒတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး မဟာယနပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သီချင်းဆိုပေမဲ့ စိတ်ငြိမ်းချမ်းစေတဲ့ Mentra လေ။ အဲဒီတုန်းက ဟင် ခဲ့ပေမဲ့ ခုများတော့ နားမလည်ပေမဲ့လည်း စိတ်ကိုအေးချမ်းစေလို့နားထောင်နေတယ်။ အဲဒီသီလရှင်နာမည်က Ani Choying Drolma ။ သူ့ ရဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်က Om mani padme hum (ဥုံ မန်ဒီ ပန်မယ် ဟုန်)။ အရဟံဆိုပြီး ပုတီးတစ်လုံးချသလို ဥုံ မန်ဒီ ပန်မယ် ဟုန် ဆိုပြီး သစ်တုံးကို တစ်ချက် စည်းချက်ညီညီ ခေါက်တဲ့ သီချင်း၊ ဥုံမန်ဒီ ပန်မယ် ဟုန်ကိုပဲ အသံအမျိုးမျိုးနဲ့ဆိုသွားတဲ့ သီချင်းဆိုပြီး ဗားရှင်းအမျိုးမျိုး ရှိသေးတယ်။ ဒီ Sanskrit စာလုံးက ဥုံလို့အသံထွက်ရတာလား ဟုတ်တယ်။ အဲဒီဥုံလက်စွပ် ဝတ်ထားရင် ကံကောင်းစေတာလား ဟုတ်ဘူး စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေတယ်။ ဟင် စိတ်ကို သတိမကပ်ဘဲ လက်စွပ်ဝတ်ရုံနဲ့ဘယ်လိုလုပ် တည်ငြိမ်စေမှာတုန်း။
ဒီအရုပ်လေးက ဘာအရုပ်လဲဟင် ဂီနေရှား။ သြော် ကိုယ့်သူငယ်ချင်း နီပါလီတွေက ဂီနေရှားနတ် ကိုးကွယ်တယ်။ ( ရာမားက Elephant God လို့ ခေါ်ရင် မကြိုက်ဘူး) ဆိုင်ပိုင်ရှင်က သူလည်း နီပါလီစကား ပြောတတ်တယ်။ မင်းတို့မြန်မာပြည်မှာ နီပါလီတွေ အများကြီးပဲ။ ဟမ် ကိုယ် ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ မြေပြန့် ဒေသမှာ နီပါလီတွေ မရှိဘူး။ ဂေါ်ရခါးဆိုတာတော့ ကြားဖူးတယ်။ နီပါလီတွေက အနောက်မြောက်ဖက်က ချင်းတောင်ဖက်မှာ နေကြတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အင်း ဟုတ်လိမ့်မယ် နီပါလီတွေ တသိန်းလောက် ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ နယူးယောက်က မြန်မာတွေဆီကနေ အိတ်ဝယ်တယ်။ ကျေးဇူးပဲနော် အဲဒီလို သိချင်တာတွေကို မေးမြန်းစပ်စု ဘာမှမဝယ်ဘဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ပြန်ထွက်လာတယ်။ ငွေထည်ပစ္စည်းဆိုင်ရောက်လို့လှတာလေးတွေ၊ အဖိုးနှုန်းသင့်တာလေးတွေ တွေ့ ပေမဲ့ Accessories ကို သိပ်မဝတ်ဖြစ်တော့ မဝယ်တော့ပါဘူးလေ။ Glass နဲ့ လုပ်တဲ့ လက်ဝတ်ရတနာလေးတွေ အတော်လှတယ် ဈေးကလည်း မသေးဘူး။ ဂိုက်က နေ့ လည်စာ တခါတည်းစားဖို့မှာထားတော့ စတားဘာ့ခ်မှာ Strawberry smoothie ၊ Pumpkin bread ၊ Chocolate croissant စားနေတုန်း စတားဘာ့ခ်ကနေ ဘာဝယ်ခဲ့ပေးရမလဲလို့ဝိုင်းကို မက်ဆေ့စ်ပို့ တာ ပြန်မလာဘူး။ ကိုယ့်တုန်းကလည်း ရတဲ့ ၁၊ ၂ နာရီအတွင်း အကုန်နှံ့ အောင်ပတ်တော့ နေ့ လည်စာကို ဘီစကွတ်၊ ဘလူးဘယ်ရီပိုင်းတို့ နဲ့ပြီးရတာမျိုးလား။ ဝိုင်းလည်း အဲ့ဒီလိုပဲ နေမှာ။
သီချင်းတော့ ကြိုက်ပါရဲ့လက်တွေအများကြီးကို ကြောက်တယ် :)
အချိန်စေ့လို့ဂိတ်ပေါက်ဝမှာ သွားစောင့်တော့ ဝိုင်း ထွက်လာတယ်။ မက်ဆေ့၊ ဖုန်းလည်း မစစ်နိုင် မြေပုံကိုင်ပြီး အနှံ့ ပတ်နေတာတဲ့ ထင်သားပဲ။ စတယ်လာရေနဂါး Stellar sea lion ရှိတဲ့ ရေသတ္တဝါပြတိုက် လေးခုထဲမှာ မစ်စတစ်ရေသတ္တဝါပြတိုက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အောက်ဒိုးဝေလငါးပြခန်း အကြီးတွေထဲ တခုအပါအဝင်ပါ။ ငါးလိပ်ကျောက်၊ ငါးမန်းတွေကို ကိုင်ကြည့်လို့ ရတော့ ကလေးတွေ အကြိုက်တွေ့ တဲ့ ရေသတ္တဝါပြတုိုက် ဆိုပါတော့။ အဲ လူကြီးတွေလည်း ကြိုက်ကြပါတယ်။ အဲယားကွန်းက မအေးလို့ခရီးသည်တွေက ပူညံပူညံ၊ ကားမှာ ဘက်ထရီ အပိုမပါ၊ ဂတ်စ်စတေးရှင်မှာ မိနစ် ၂၀ လောက် နားပြီး အဲယားကွန်းပြင်။ ၂ နာရီလောက် မောင်းပြီးရင် အိမ်သာအတွက် Rest Area မှာ ၁၅ မိနစ်လောက် နားဆိုတော့ ထင်သလောက် ခရီးမပေါက်ဘူး။ ဘော့စတွန်ဟာဘားခရူကို မမှီပေမဲ့ စလမ်းစုန်းပြတိုက်ကို ဝင်လည်ကြပါတယ်။ ဦးထုပ်အချွှန်ကြီးဆောင်း၊ ဝတ်ရုံနက်ကြီး ဝတ်ထားတဲ့ မျက်နှာစိမ်းစိမ်းကြီးနဲ့စုန်းမကြီး တံမြက်စည်းစီးပြီး ကိုယ့် အနားက ပျံသွားလို့လန့် အော်လေမလားလို့တွေးကြောက်နေတာ။ အရုပ်တွေကို မီးထိုးပြီး ရှင်းပြနေတာများ ကြောက်ဖို့ နေနေသာသာ ပျင်းစရာကောင်းလွန်းလို့သမ်းတောင်သမ်းတယ်လို့ကိုယ်က ရီကွန်မန်ဒေးရှင်း မပေးပေမဲ့ ယူအက်စ်ရောက်တာ ၃ လောက်ပဲ ရှိသေး၊ ယူအက်စ်မှာ ပထမဆုံး ခရီးစဉ်ဆိုတော့ ဝိုင်းက တက်ကြွစွာနဲ့အကုန်လည်တယ်။
စုန်းပြတိုက်ရှေ့ က ပန်းခြံမှာ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူရင်း စာဖတ်မလား စိတ်ကူးတယ် ပန်းခြံအလယ်မှာ အမေရိကန်နဲ့စပန်းနစ် Spanish နှစ်ကောင် ဒီဘိတ် debate လုပ်တာ ထောက်ခံသူတွေက လက်ခုပ်သံတွေ တဖြောင်းဖြောင်း၊ လက်ခေါက်မှုတ်ကြနဲ့နားညည်းလွန်းလို့မြို့ ထဲကိုပဲ သွားတော့တယ်။ စလမ်း Salem မြိူ့လေးက ၁၆၉၂ ခုနှစ်မှာ စတည်ခဲ့တာဆိုတော့ ဘော့စတွန်ထက်တောင် စောသေးတယ်။ အိမ်တွေက ပိုရှေးကျပြီး လမ်းတွေကလည်း ကျဉ်းတယ်။ မြို့ ထဲကို လမ်းလျှောက်ရင်း ဗေဒင်ဟောတဲ့ဆိုင်တွေ့ လို့ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သေးတယ်။ ဝိုင်းက မက်ဟန်တန် ဂရမ်းစင်ထရယ်နားက သူ့ အိမ်နားမှာတောင် တဆိုင်ရှိတယ်တဲ့။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းက ခေါင်းလောင်းထိုးသံ ကြားရတော့ မင်္ဂလာပွဲရှိတယ်နဲ့ တူတယ်။ ပွဲတက်ပွဲလာဝတ်စုံ ဝတ်ထားတဲ့သူတွေ တွေ့ တယ်။ ဘားမှာလည်း လူတွေ စည်ကားနေတာပဲ။ Salem Village ရှေ့ က အရုပ်နားမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာ တွေ့ ပေမဲ့ အထဲတော့ မဝင်တော့ပါဘူး။ အပြင်အဆင်က လန့် စရာကြီး တော်ကြာ ညဖက် အိမ်မက်ဖက်ပြီး လန့် အော်နေမှ။ ကိုယ်ကတော့ စုန်းပြပွဲက မတန်လိုက်တာလို့တွေးပေမဲ့ ဝိုင်းက မဆိုးပါဘူးလို့ တွေးတယ်။
အဲယားကွန်း မအေးလို့ကွန်ပလိမ်းတဲ့ ခရီးသည်တွေကို နှစ်သိမ့်တဲ့အနေက ဂိုက်က လျှောပင်းမောလ်ကို လိုက်ပို့ တယ်။ အခုရောက်နေတဲ့ နယူးဟမ်ရှိုင်းယား New Hampshire ပြည်နယ်မှာ Sales Tax ပေးစရာမလိုလို့လျှောပင်းထွက်ဖို့အကောင်းဆုံးပါတဲ့။ ဆူနမ်ဆို လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ ဝယ်ရင် ဒယ်လာဝဲယားပြည်နယ်က အက်စ်မီတာလိပ်စာနဲ့ဝယ်တယ်။ ဒယ်လာဝဲယားပြည်နယ်လည်း Sales Tax ပေးစရာမလိုဘူး။ ဆူနမ်တို့ ဆို အက်စ်မီတာဆီ သွားလည်ရင် ကားကို ဆီအပြည့်ဖြည့်၊ ကားဆားဗစ်လုပ်၊ အိမ်အတွက် လိုအပ်တာတွေ လျှော့ပင်းတော့တာပဲ။ မေရီလန်း၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီ၊ နယူးယောက်က Tax များတယ်။ ညနေစာကို ဂျပန်ဆိုင်က တာယာကီ ကြက်၊ ပုဇွန် မှာတော့ ဗိုက်ဆာနေလို့ ပဲလားမသိ စားကောင်းသား။ စားသောက်ပြီးလို့အသီးစာချင်းလို့တားကဒ် Target ဆိုင်မှာ အသီးသွားရှာတော့ ဗူးလေးတဗူးကို ၅ ကျပ်တောင် တောင်းတယ်။ ဟင် ဈေးကြီးလိုက်တာ။ ကားပေါ်တက်ခါနီး မြန်မာသံ ကြားလိုက်တယ် ကားပေါ်မှာ မြန်မာတွေပါတယ် ထင်ပါ့ ညမှောင်နေလို့မမြင်လိုက်ဘူး။
ခရီးသွားတယ်ဟေ့ဆိုရင် ဆူနမ်၊ ရာမား၊ အမ်းထရူးတို့ နဲ့သွားနေကျ။ နယူးယောက်ကို ပြောင်းလာပြီး ကတည်းက ဆူနမ်တို့ နဲ့ခရီးမသွားဖြစ်တော့တာ။ မေရီလန်းနဲ့နယူးယောက်ကလည်း မိုင် ၂၅၀ ၊ ၄ နာရီ ကျော်လောက် ဝေးတာကိုး။ မေရီလန်းမှာတုန်းကဆို နောက်နှစ်ရက်မှာ ခရီးသွားရအောင် မနက်ဖြန် ညနေ လာခဲ့လို့ဆူနမ်က မှာတယ်။ ၁၀ မိုင် ၊ မိနစ် ၂၀ လောက်ပဲ ဝေးတာဆိုတော့ ကြိုက်တဲ့အချိန် ထသွား အဆင်ပြေတယ်။ နယူးယောက်ရောက်ပြီးမှ ဝါရှင်တန်ဒီစီ ချယ်ရီပွဲတော်၊ မောက်ဗာနွန် Mount Vernon ၊ ဖီလာဒဲဖီးယား၊ အက်ကေးဒီယားတို့ ကို တစ်ယောက်တည်း သွားခဲ့တာပါ။ အပတ်တိုင်း နယူးယောက်တခွင် လမ်းလျှောက်ဖြစ်တဲ့ meetup အဖွဲ့ မှာ ဗီယက်နမ်မလေး ဝိုင်းနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တော့ သူကလည်း နယူးယောက်ကို ပြောင်းလာတာ ၄ လလောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ meetup အဖွဲ့ က လမ်းလျှောက်တဲ့ ခရီးစဉ်က စိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းရင် နယူးယောက် အထက်ဖက် အက်ဖ်စတိတ် upstate လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ဟူစတန် Hudson မြစ်ဝှမ်းက Cold Springs ကို ဂရမ်းစင်ထရယ်ကနေ မတ်ထရိုနော့စ် Metro North ရထား ၁ နာရီစီးသွားပြီး တောင်တက်။ ညနေ ၆ နာရီလောက် နယူးယောက် ပြန်ရောက်တော့ ကိုယ်က ပင်ပန်းလို့အိမ်ရောက်တာနဲ့ဒိုင်ပင် ပစ်အိပ်တော့တာ။ ဝိုင်းက architecture meetup အဖွဲ့ နဲ့မက်ဟန်တန်တခွင် လမ်းလျှောက်တာ ည ၁၁ နာရီလောက်မှ အိမ်ပြန်ရောက်တယ်။
Port Authority ကနေ ဘတ်စ်ကား ၁ နာရီစီးပြီး Bear Mountains တောင်ကို သွားတက်တာ ၃ ရက်လောက် ခြေသလုံးနာနေသေးတယ်။ နောက်နေ့မက်ဟန်တန်အောက်ဖက်ကနေ စတေတန်အိုင်လန်ဆီကို အခမဲ့ပြေးဆွဲတဲ့ Staten Island Ferry စီးပြီး စတေတန်အိုင်လွန်တခွင် လည်ကြပြန်တယ်။ ပိတ်ရက် ၂ ရက်မှာ ၁ ရက်ကို လမ်းလျှောက်၊ ၁ ရက်ကို ဈေးဝယ်၊ သန့် ရှင်းရေးလုပ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် active ဖြစ်လှပြီထင်နေတာ ဘယ်ကသာ ကိုယ် active ဖြစ်တာ ဝိုင်းကို ဘယ်မှီပါ့မလဲ။ ဝိုင်းဆို နေ့ လည် meetup အဖွဲ့ ဆီ မလာခင် မနက်ဖက် စင်ထရယ်ပါ့ခ် central park မှာ လမ်းသွားလျှောက်၊ Gym မှာ Jumba ၊ sasa ၊ yoga ၊ ballet သွားကသေးတာ။ တခြား meetup အဖွဲ့ တွေနဲ့ လည်း လမ်းလျှောက်သေးတယ်။ Cold Springs နဲ့Bear Mountains မှာ တောင်တက်တဲ့အကြောင်းတွေ နောက်မှရေးဦးမယ်။ ဝိုင်းနဲ့စသိပြီးကတည်းက ပိတ်ရက်တွေဆို အိမ်မကပ်တော့ဘဲ နယူးယောက်တခွင် လိမ့်နေတာပဲ။
ဗီယက်နမ်မြောက်ပိုင်း ဟနွိုင်းမှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ဝိုင်းက တနိုင်ငံလုံး အင်္ဂလိပ်စာ စာမေးပွဲမှာ ဒုတိယရတော့ နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ထပ်ဖြေစရာမလိုဘူး။ သူ ရွေးလိုက်တဲ့တက္ကသိုလ်က တနိုင်ငံလုံးမှာ တခုတည်းရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတက္ကသိုလ်ပါ။ သူတို့ ကျောင်းမှာ ပြင်သစ်ဘာသာသင်၊ အင်္ဂလိပ်စကား ပြောရတော့ ဝိုင်းရဲ့ လေယူလေသိမ်းက ကိုယ်တွေ့ ဖူးတဲ့ ဗီယက်နမ်တွေထက်စာရင် အများကြီးကောင်းတယ်။ မိုင်း၊ Nga ငါး၊ ဟွားလဲ့တို့ ဆို အင်္ဂလိပ်စာ ကောင်းပေမဲ့ အသံထွက်က မကောင်းဘူး။ ဝိုင်းက စကော်လားရှစ်လို့ ရလို့ ဘန်ကောက် အေအိုင်တီ၊ ပြင်သစ်တက္ကသိုလ်မှာ တစ်နှစ် တက်ဖူးတယ်။ အလုပ်ရတဲ့ အီတလီမှာ ၇ နှစ် နေခဲ့ပါတယ်။ ယူအက်စ်အလုပ်က ၁ နှစ် ကွန်းထရပ် စာချုပ်ထပ်မတိုးရင် အီတလီကိုပဲ ပြန်မှာပါတဲ့။ ယူအက်စ်မှာ ရှိနေချိန်အတွင်းမှာ တတ်နိုင်သလောက် ခရီးသွားဖို့စိတ်ကူးထားပါသတဲ့။ အီတလီမှာနေတဲ့ ပထမနှစ်တုန်းက သားရေအိတ်တွေကို ခရေဇီဖြစ်တာတဲ့။ အီတလီသားရေတွေကလည်း ကောင်းမှကောင်း ဈေးကလည်းကောင်း။ နောက်တော့ ဘဝကို တတ်နိုင်သလောက် ရိုးရိုးစင်းစင်းလေး နေထိုင်ပြီး ခရီးတွေ တတ်နိုင်သမျှ သွားပါသတဲ့။
ဝိုင်းက ကိုယ့်ထက် ၁ နှစ်ကြီးတယ် ရည်းစားလည်း မရှိ မချက်ပြုတ်တတ်တာလည်း တူတယ် ။ ခရီးသွားတာ၊ တောင်တက်တာ ဝါသနာပါတဲ့ အပျိုကြီးနှစ်ယောက် အကြိုက်တူ၊ စရိုက်တူ ဆိုပါတော့။ ဥရောပတခွင် ဝိုင်း မရောက်ဖူးတဲ့နိုင်ငံ မရှိသလောက်ဘဲ။ တန်ဇနီးယား၊ အာဖရိကနိုင်ငံအချို့ ကိုလည်း အလုပ်ကိစ္စနဲ့ရောက်ဖုူးတယ်။ စီမီနာအတွက် ဝါရှင်တန်ဒီစီကို ရောက်ဖူးတယ်။ ဝိုင်းက ယူအန် United Nations မှာ အလုပ်လုပ်နေတာပါ။ ဥရောပတခွင် ပြဲပြဲစင်တဲ့ ဝိုင်းကို ကိုယ်က အားကျသလို ယူအက်စ်အရှေ့ အလယ်ပိုင်းတခွင် ပြဲပြဲစင်တဲ့ ကိုယ့်ကိုလည်း ဝိုင်းက အားကျပါသတဲ့။ ကိုယ်တို့ တညအိပ်တဲ့ ဟိုတယ် Raddison က နယူးဟမ်ရှိုင်းယားပြည်နယ် နာရှာ Nashua မြို့ လေးနားမှာပါ။ ဟိုတယ်က ရဲတိုက်နဲ့ တူပြီး ဒီမြို့ မှာ အကောင်းဆုံးပါတဲ့။ ဟိုတယ်တွင်း ဆေးလိပ်မသောက်ရပါ။ သောက်ခဲ့ရင် ဒဏ်ငွေ ၂၅၀ ပါတဲ့။မိန်းပြည်နယ်ထဲ အပိုင်း ၂ ကျမှ လည်ကြရအောင်နော်။
Ice - Bucket - Challenge လုပ်တာကို အားကျလို့တဂျီးမင်းက BPP Challenge လုပ်နေပါတယ်။ ပစ်ပစ်က တဂ်လာတော့ ကိုယ်လည်း ဒီပို့ စ်အသစ်နဲ့ အားကျမခံ ဘလော့ဂါ ၁၀ ယောက်ကို တဂ်မယ်နော့။
၉ ။ မဂျက်
ဒီဘလော့လေးကတော့ Imee Ooi သီချင်းတွေ စုထားတဲ့ ဆိုဒ်လေးပါ။ ပြင်သစ်ဘာသာနဲ့ရေးထားတာလား မသိဘူး။ စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုရင်ပေါ့။
စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၄။